YEYINTNGE(CANADA): Friday, July 24
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/24/20090အကြံပြုခြင်း
Teaching to Burmese PM How to Talk With Chinese PM
နေပြည်တော် က ၀ါရှင်တန် ကိုအာခံမှုများပြုလုပ်လာ
၂၄ ဇူလိုင် ရန်ကုန် ၊ ၊တင်ကျော်ကျော်စိုး
Naypyitaw Defiance Washinton
မြန်မာ အရေးကရှေ့တန်းရောက်သွားသည့် ဖူးခက်အာဆီယံ အစည်းအဝေးပြည်တွင်း၊ပြည်ပ နှင့် နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်ပစ်တင်မှုများ ရှိလင့်ကစား စစ်အစိုးရသည် ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားခွင် အားဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ် နိုင်ငံတကာ အထူးသဖြင့် အမေရိကန် ကို အာခံသည် ဟု ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ယနေ့ သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား နှစ်ဘက် အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်ပေးသည့် နေ့ တွင် ပင် စစ်အစိုးရ အာဘော် သတင်းစာများ ဉ် ဆောင်းပါးရှင် လူသစ် ဆိုသူက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းဆီးတရားစွဲ ဆိုထားခြင်းသည် တရားရုံး နှင့် သာသက်ဆိုင်ကြောင်းရေး သားထားသလို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုသည် မှာ လည်းမရှိကြောင်းဖေါ်ပြထားသည်။
ဖူးခက် တွင်ကျင်းပနေသည့် အာဆီယံအစည်းအဝေး သို့ တက်ရောက် လာသူ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားများပြန် လွှတ်ပေးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် ၀ါရှင်တန် နှင့် အဆွေ ခင်ပွန်းကောင်းဆက်ဆံရေး နီးပါး ပြန်လည်ရရှိမည် ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လွှတ်ပေးရန် အတွက် အမေရိကန် ၏ သဘောထားကိုပင်ဆန့် ကျင်ကာ ယနေ့ တရားခွင်ကို ပြန်စခြင်းသည် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း နှင့် ၀ါရှင်တန် အားစစ်အုပ်စု မှ မထေမဲ့မြင် ပြုခြင်းဖြစ်သည် ဟု ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက သုံးသပ်ကြသည်။ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်း ပြုလုပ်သောတရားခွင်တွင် နိုင်ငံခြားသံတမန်များကို လာရောက်ခွင့်ပြုသည်။
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 39 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုအတွက် နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်ကို ယနေ့ တင်ပြခဲ့ရာ အင်းစိန်ထောင်တွင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် အထူးတရားရုံးက ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုလိုက်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုအတွက် စာမျက်နှာပေါင်း ၂၃ မျက်နှာပါ နောက်ဆုံးလျှောက်လဲချက်ကို အင်းစိန်ထောင် တရားခွင်၌ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲမှ ညနေ ၄နာရီခွဲထိ လျှောက်လဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်က ပြောသည်။
“ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက နေပြီးတော့ လျှောက်လဲချက်ကို တင်ပြခဲ့တယ်။ ဒီနေ့အတွက် ရုံးချိန်ကုန်ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆိုပြီးတော့ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ချိန်းလိုက်တယ်” ဟု အဖွဲ့ချုပ် သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးအုန်းကြိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လာမည့် ၂၇ ရက်နေ့မှာ ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူနေသူ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း သားအမိ၏ အမှုလျှောက်လဲချက်ကို တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တော၏ အမှုအတွက် သူ၏ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဦးက လျှောက်လဲမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခုကဲ့သို့ ရုံးချိန်းများ ပေးနေခြင်းကို သဘောမကျကြောင်း တရားခွင်အပြီးမှာ ပြောကြားခဲ့သေးကြောင်းကို အန်အယ်ဒီ ရန်ကုန်ဌာနချုပ်၌ ယနေ့ညနေတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းပွဲ၌ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ ခု ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမဝင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ပြောသင့်သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းအား မှာကြားလိုက်ကြောင်းလည်း ရှေ့နေဦးခင်မောင်ရှိန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယနေ့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက် တင်သွင်းရာသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေများဖြစ်ကြသည့် ဦးကြည်ဝင်း၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးလှမျိုးမြင့်နှင့် ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်တို့သာမက အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်တို့အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံတချို့မှ သံတမန်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
တရားဆိုင်သက်သေများအဖြစ် ပုဂ္ဂိုလ် ၄ ဦးကို အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့သော်လည်း လပွတ္တာ အန်အယ်ဒီအမတ် ဦးကြည်ဝင်းနှင့် တောင်ကြီးမြို့မှ ရှေ့နေဒေါ်ခင်မိုးမိုးတို့ နှစ်ဦးကိုသာ ခွင့်ပြုပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်နှင့် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးတို့ကို ဗဟိုတရားရုံးက ပယ်ချခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အတွင်းသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ဝီလျံယက်တောသည် မေလဆန်းက အင်းလျားကန်မှ ရေကူးကာ တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်၍ နှစ်ညတာ နေထိုင်ခဲ့သဖြင့် သူမကို စစ်အစိုးရက “နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂” ဖြင့် စွပ်စွဲပြီး ရုံးတင်စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရဘက်မှ တရားလိုပြ သက်သေများအဖြစ် အနည်းဆုံး ၂၃ ဦး တင်ပြခဲ့သော်လည်ှး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ခြံဝန်း လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူထားခဲ့သူများ၏ အမည်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိပေ။
လုံခြုံရေး အားနည်းခြင်းကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တောအနေဖြင့် ခြံဝန်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများအား အရေးမယူခြင်းသည် တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြင်သည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ယခင်က ပြောပြသည်။
အကယ်၍ ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လျှင် သူမအနေဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ ကျခံရဖွယ်ရှိသည်။
အင်းစိန်လမ်းမ ပိတ်ထားပြီး လုံခြုံရေးလည်း ယခင်ကထက် ပိုချထားသည်။
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 14 နာရီ 10 မိနစ်
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 22 နာရီ 29 မိနစ်
မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်တချို့တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်ပေးသည့် ယနေ့တွင် ဘုရားများသို့ သွားရောက်ကာ လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲများ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အခြေအနေများကို မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက မဇ္ဈိမကို ပြောပြထားပါသည်။
''ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုံးချိန်အနေနဲ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းဖို့ နှိုးဆော်ထားတာက မြို့ပေါင်း ၃ဝ ပါတယ်။ ဘုရားမှာ သပြေပန်းတွေ ကပ်လှူတယ်။ မနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ သွားကြတယ်။ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ပြန်ရောက်တယ်။ ဘုရားဝတ်ပြုတာကိုက မိနစ် ၄ဝ လောက် ကြာတယ်။ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်တယ်၊ ဆုတောင်းတာတွေ လုပ်တယ်''။
''မိတ္ထီလာမှာ ရွှေမျှင်တင်ဘုရားမှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်။ သာစည်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ၅ ဆူရိပ်သာ သတ္တဋ္ဌာန ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားမှာ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဆောင် ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်။ သဲတောမြို့ပေါ် မြဘုန်းရှင်ဘုရားမှာ အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းက ဦးဆောင်ပြီး ဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်။ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် သဲစုကျေးရွာအုပ်စု တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ကိုအောင်သူ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးက သွားပြီးတော့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်။ ၂ မိုင်မှာလည်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ရှိန်က သွားရောက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်''။
''ကျမတို့ မိတ္ထီလာမှာက ဘုရားကို သွားပြီးတော့ နောက်ကနေ တန်းပြီးပါလာပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ဘာတွေ ရိုက်တယ်။ ရဲကားတစီးလည်း ဘုရားပရိဝုဏ်ထဲကို မောင်းလာပြီး ရပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့၊ တွေ့ရတယ်။ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ သဘောမျိုးလည်း သက်ရောက်ရင် သက်ရောက်မယ်။ ကျမတို့ ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ ကျမတို့ ဖြတ်ပြီးပြန်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာက အမှတ် (၁) မီးသတ်ဋ္ဌာနရှိတယ်။ မီးသတ်ထဲမှာ လူအင်အား ၅ဝ နဲ့ ၁ဝဝ ကြားမှာ ရှိမယ်။ ရပ်ကွက်တိုင်းက ရဝတ (ရပ်ကွက်ကောင်စီ) တွေ ထိုင်စောင့်နေတယ်။ ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့၊ စွမ်းအားရှင်ရော။ ကျမတို့ အဖွဲ့ဝင် ၁ဝ ယောက်၊ ကလေးနဲ့ဆို ၁၁ ဦးပါ။ ရွှေမျှင်တင်ဘုရားမှာ သွားရောက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းကြတာပါ''။
''ဒီကနေ့ ကျမတို့လုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုက ဘုရားကို သွားပြီး ဝတ်ပြုဆုတောင်းကြဖို့။ အဲဒီလို မသွားနိုင်တဲ့သူတွေက မိမိတို့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားမှာ သပြေပန်းတွေ ကပ်လှူပြီးတော့၊ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ဖို့၊ ဆုတောင်းပေးဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်''။
''ကျမတို့က ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတရပ်လုံးက ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုရမှာပဲ။ နောက်ဆုံးပိတ် ထောင်ကျသွားမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ထောင် တသက်လုံး ကျမနေဘူး။ စစ်အစိုးရကလည်း တသက်လုံး အုပ်ချုပ်မနေနိုင်ဘူး။ အုပ်ချုပ်လို့ မရဘူး။ ကျမတို့ ပြည်သူက တသက်လုံး ဒုက္ခရောက်မနေဘူး။ တချိန်မှာ ထွက်ပေါက်ဆိုတာ ရှိမှာပဲ''။
''ဒီထွက်ပေါက်ကို စစ်အစိုးရနဲ့၊ ကျမတို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေက အားလုံး လက်တွဲပြီး ဖြေရှင်းသွားကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါက နောက်ဆုံးပိတ် အဖြေပဲ''။
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 22 နာရီ 31 မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ခရိုင်ဒေသအဆင့်များတွင် ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေး ကူးစက်မှုအခြေအနေ လျင်မြန်စွာ သိရှိနိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော လျှပ်တပြက် တုံ့ပြန်အဖွဲ့များရှိနေကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနက ပြောသည်။
A (H1N1) ရောဂါကူးစက်ခံရသူဟု သံသယရှိသူ၏ နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းမှ အရည်ကြည် နမူနာကို ရန်ကုန်ရှိ Polymerase Chain Reaction (PCR) ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွင် ယူသွားခြင်းပြီး အတည်ပြုပေးနိုင်သည့်အတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကူးစက်ဌာနက ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“တနိုင်ငံလုံးမှာ ခရိုင်အဆင့်ထိ ဒီ RRT အဖွဲ့ (လျပ်တပြက်တုံ့ပြန်) ကို ဖွဲ့ထားတယ်။ PCR က ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိတယ်။ လူနာကို ရန်ကုန်အထိ ခေါ်သွားဖို့ မလိုဘူး။ နှာခေါင်းထဲက အရည်ကြည် နမူနာကို ယူပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ PCR ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ အတည်ပြုချက် ယူရပါမယ်” ဟု ကူးစက်ဌာနမှ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
“PCR- Polymerase Chain Reaction, Laboratory base Surveillance ပါ။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုပြီးမှပဲ အတိအကျ ပြောလို့ရပါတယ်။ ရိုးရိုးစမ်းသပ်တာမျိုး၊ microscope (အနုကြည့်မှန်ပြောင်း) တို့ဟာမျိုးနဲ့ ကြည့်လို့ မမြင်ရပါဘူး။ အဖြေကို ၄၈ နာရီအတွင်း သိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေး A (H1N1) ရောဂါပိုးကို ပြီးခဲ့သည့် လနှောင်းပိုင်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ပြန်လာသည့် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတွင် စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ယခုဆိုလျှင် ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၆ ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ထုတ်ပြန်ရေးသားထားသည်။
သြစတြေးလျားနိုင်ငံမှ ပြန်လာသူ ၄၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦး ဖျားနာသဖြင့် ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အထူးကုဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ရာမှ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်းနှင့် လူနာ၏ လည်ချောင်း၊ နှာခေါင်းမှ အရည်ကြည် နမူနာ ရယူပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲဌာနတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ A (H1N1) ပိုးတွေ့ရှိရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသားမှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့က ထိုင်းလေကြောင်း ခရီးစဉ်အမှတ် TG-305 ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် လူနာနှင့်အတူနေသူ မိသားစုဝင် ၅ ဦးအား နေအိမ်တွင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း ဆောင်ရွက်စဉ် လူနာ၏ ၃ နှစ်နှင့် ၆ လအရွယ် သမီးဖြစ်သူမှာ ဖျားနေသဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ တက်ရောက်စေခဲ့ကြောင်းနှင့် ကလေးငယ်အား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲဌာနက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ A (H1N1) ပိုးတွေ့ရသဖြင့် ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီး သီးသန့်လူနာခန်းတွင် ကုသပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရောဂါကူးစက်ခံရသည့် ကလေးငယ်ကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးသည့် အရှေ့အနောက် ပါရမီ အထူးကုဆေးခန်းမှ ဆရာဝန်၏ မိသားစုဝင်များကိုလည်း နေအိမ်မှ အပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားကြောင်း ၎င်း၏ အိမ်နီးနားချင်း မိတ်ဆွေတဦးက ပြောသည်။
“ဆရာဝန် တမိသားစုလုံးကို အိမ်မှာပဲ နေရတယ်။ ဒီမိသားစုတွေ လိုအပ်တာတွေကိုတော့ ရပ်ကွက် ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ယူပြီး အပြင်ကနေ ကျန်းမာရေး ဌာနနဲ့ ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
လူနာအမျိုးသားနှင့်အတူ စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည် ၂၄၆ ဦးကို သူတို့နေထိုင်ရာ နေရာများသို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာ ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိကြောင်းနှင့် လူနာနှင့် ထိတွေ့မှု ရှိခဲ့သူများကိုလည်း သူတို့နေထိုင်ရာ နေရာ ၇ နေရာတွင် နေအိမ်၌ပင် နေထိုင်စေပြီး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေကြောင်း သတင်းစာက ဖော်ပြထားသည်။
A (H1N1) ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၆ ဦးအနက် ၃ ဦးမှာ ရောဂါပျောက်ကင်းသဖြင့် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကျန်ရှိသည့် ၃ ဦးကို အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် စနစ်တကျ ပြုစုစောင့်ရှောက်နေကြောင်း ဆက်လက် ဆိုထားသည်။
A (H1N1) ကူးစက်ခံရသူ ၆ ဦးစလုံးသည် ပြည်ပမှ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ကူးစက်ခံရသူများဖြစ်ပြီး၊ ပြည်တွင်းမှ ရောဂါကူးစက်မှု မရှိသေးကြောင်း ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိစပ်နေသည့် နယ်စပ်ဒေသများမှ နေ့စဉ် ဝင်ထွက်သွားလာနေသူများမှတဆင့် ရောဂါပိုးကူးစက် ပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးကြသည်။
သို့သော် ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကမူ နယ်စပ်ဒေသများတွင် စောင့်ကြပ်သည့် အဖွဲ့များဖြင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည့်အပြင်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများ တစုံတရာ ဖျားနာမှုရှိပါက ကြိုတင်သတင်းပေးသည့် စနစ်ကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောသည်။
သူက “နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်နဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ early warning system နဲ့ လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီကနေ သတင်းတွေရတာနဲ့ ချက်ချင်း ကျနော်တို့ သွားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အခြေအနေကို ထိမ်းချုပ်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် အာဆီယံ ပလပ်စ်ထရီးနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ လှူထားသည့် Tamiflu ဆေးဝါးများဖြင့် အဆင်သင့်ရှိကြောင်းနှင့် A (H1N1) ရောဂါ အုပ်စုလိုက် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ဖြစ်လာပါက ကာကွယ်ကုသနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် Tamiflu ဆေး ရရှိရေးအတွက် WHO အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကြိုတင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဒေါက်တာ ဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
Tamiflu ဆေးဝါးများကို ရောဂါကာကွယ်ရေး အတွက်သာမက ကုသဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များ၏ ညွန်ကြားချက်ရရှိမှသာ သောက်သုံးသင့်ကြောင်း သူက ပြောဆိုသည်။
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 15 နာရီ 51 မိနစ်
ထို့အပြင် (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု အန်အယ်ဒီက တောင်း ဆိုထားမှုသည်လည်း စစ်အစိုးရက မဖြစ်မနေ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် “မူဝါဒလမ်းစဉ် (၇) ရပ်” အား နှောင့်နှေး၊ ပျက်ပြားစေရန် ကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲရေးသားထားသည်။
အန်အယ်ဒီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွှန်ဝီလျံ ယက်တော သူမ၏ နေအိမ် အတွင်း ခိုးဝင်သည်ကို အကြောင်းပြု၍ “နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂” ဖြင့် စွပ်စွဲ၍ အင်းစိန်ထောင်၌ ရုံးတင်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
၁၉၉၀ ခု အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် အန်အယ်ဒီ ပါတီက ထောက်ခံမဲ အမြောက်အများဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား ယနေ့အထိ အသိမှတ်ပြု အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းမရှိသေးပေ။
ယင်းကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အမဲစက်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့်ဟုဆိုကာ ၁၉၉ဝ ခု ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား တနည်းနည်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုပေးရန် အန်အယ်ဒီပါတီက တောင်းဆိုထားသည်။
သို့သော် စစ်အစိုးရ၏ ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ထုတ် သတင်းစာများကမူ ၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉ နှစ်ကျော် “Date အောက်” နေသည့်ရလဒ်ကို ပြည်သူများက ပြန်လှည့်ကြည့်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြကြသည်။
ထို့အပြင် နအဖက ဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့သော အမျိုးသားညီလာခံမှ ထွက်ခွာသွားသဖြင့် “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး” ဆိုသည်မှာ လည်း “လုံးဝအဓိပ္ပါယ်မရှိ” သည့်အခြေအနေကို ရောက်နေပြီဖြစ်သည်ဟု ရေးသားထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုကိစ္စသည် တရားရုံးနှင့်သာ သက်ဆိုင်သဖြင့် တရားရုံးက အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့လျင် ဥပဒေနှင့်အညီ အပြစ်ပေးအရေးယူမှုကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အပြစ်မရှိကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့လျင် တရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းပါ ကလောင်ရှင် လူသစ်၏ ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြသည်။
သို့သော် ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရေး အတိုက်အခံများ၊ ရှေ့နေများ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ ကမူ စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နေသည်သာမက ပြည်တွင်းဥပဒေကိုပင် လိုက်နာခြင်းမရှိပဲ သဘော ထားကွဲလွဲသူများကို ဖမ်းဆီးပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း၊ ရပ်ဝေးအကျဉ်းထောင်များသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းများ လုပ်နေကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခြင်းခံနေရသူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP-B က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 15 နာရီ 40 မိနစ်
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 15 နာရီ 46 မိနစ်
ရန်ကုန်။ ။ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ငါးနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ လူဦးရေ (၃၇၀၀) ကျော် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းလူနာများအနက် နှစ်စဉ်ပျမ်းမှ လူ(၃ဝ)ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ရန်ကုန်တိုင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွား/သေဆုံးမှု စာရင်းဇယားအရ (၂၀၀၄)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၈) ခုနှစ်အထိ ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၁၈၅၆၈)ယောက် ရှိခဲ့ပြီး (၁၅၁) ယောက် သေဆုံးခဲ့ကာ နှစ်စဉ် မိုးတွင်းကာလဖြစ်သော ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လ များသည် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား မှုနှင့် သေဆုံးမှု အများဆုံး ကာလများ ဖြစ်သည်။
(၂၀၀၅) ခုနှစ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး (၅၆၂၁)ဦး ဖြစ်ပွား၍ လူဦးရေ (၄၀) သေဆုံးခဲ့သည်။ (၂၀၀၇)ခုနှစ်တွင်မူ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၄၉၄၈) ယောက်သာ ရှိခဲ့ သော်လည်း သေဆုံးသူဦးရေ (၅၄) ဦးရှိခဲ့ကာ ငါးနှစ်အတွင်း အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခု (၂၀၀၉)ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၂၃) ရက်နေ့အထိ စာရင်းဇယားအရ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ (၈၃၈)ယောက် ရှိခဲ့ပြီး (၆) ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၄၅) မြို့နယ်အနက် လူဦးရေ ထူထပ်၍ အခြေခံလူတန်းစား ပိုမိုများပြားသော မြို့နယ်များနှင့် မြို့စွန်ဆင်ခြေဖုန်းမြို့နယ်များ ဖြစ်သော သာကေတ၊ သင်္ကန်းကျွန်း၊ တာမွေ၊ လှိုင်သာယာ၊ လှည်းကူး၊ တိုက်ကြီး၊ ရွှေပြည်သာ စသောမြို့နယ်များသည် နှစ်အလိုက် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း များပြားသကဲ့သို့ ယခုနှစ်တွင်လည်း ဖြစ်ပွားမှု အများ ဆုံး မြို့နယ်များပင်ဖြစ်ရာ ယင်းမြို့နယ်များတွင် ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေအထား အားနည်းလျှက်ရှိကြောင်း သိသာစေသည်။
ယခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း၌ (၂၃) ရက်နေ့အထိသာ စာရင်းကောက်ယူခဲ့ရသေးသော်လည်း ခြောက်လရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွင် အများဆုံးဖြစ်နေပြီး (၃၄၉) ယောက် ရောဂါဖြစ်ပွားကာ (၄) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
သို့သော် ဝန်ကြီးဌာန၏ အချက်အလက်များမှာ လျော့နည်းနေသေးသည်ဟု တွက်ဆမှုလည်း ရှိနေသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆရာဝန်တဦးက နှစ်စဉ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား/သေဆုံးမှု စာရင်းဇယားကောက်ယူရာတွင် အားနည်းချက်များရှိနေသေးကြောင်း၊ စာရင်းပြုစုရန် သတင်းအချက်အလက်များကို ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များထံမှ ကောက်ယူရာတွင် မပြည့်စုံမှုများ၊ ထိန်ချန်မှုများ ရှိနေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးကာလ၏ စာရင်းဇယားများ မကောက်ယူရသေးသော်လည်း ယမန်နှစ်( ၂၀၀၈) ခုနှစ် ဖြစ်ပွား/သေဆုံးမှုနှုန်း အောက်တွင်သာ ရှိနိုင်ကြောင်း သူက ခန့်မှန်းပြောကြားသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ရန်ကုန်တိုင်းရောဂါ ဖြစ်ပွား သေဆုံးမှုနှုန်း
ခုနှစ် ဖြစ်ပွား / သေဆုံး
၂၀၀၄ ၂၈၆၅ / ၈
၂၀၀၅ ၅၆၂၁ / ၄ဝ
၂၀၀၆ ၁၅၃ဝ / ၁၈
၂၀၀၇ ၄၉၄၈ / ၅၄
၂၀၀၈ ၃၆ဝ၄ / ၃၁
၂၀၀၉ (ဇွန်-၂၃ထိ) ၈၃၈ / ၆
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 01 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်အောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဆန့်ကျင် တော်လှန်မှုတွင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သည့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် စစ်တိုင်းမှူးဖြစ်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင် (ငြိမ်း) (၉ဝ နှစ်) သည် ယခုလ ၈ ရက်နေ့တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
သူသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ် နိုင်ငံတော်အာဏာ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် အနည်းစုထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်းက တိုင်းပြည်အာဏာကို သိမ်းလိုက်ပြန်ပြီးနောက် သူ့ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်အဖြစ် အစ္စရေး၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် သြစတြေးလျားနိုင်ငံတို့တွင် အမှုထမ်းရန် စေလွှတ်ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် အငြိမ်းစား ဘဝဖြင့် ရပ်တည်ကာ သေဆုံးသည့်တိုင် နေထိုင်သွားခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်ကို ၁၉၂ဝ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်၌ ဇနီး၊ သားသမီးများနှင့် မြေး ၈ ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ခရစ်ယာန်ထုံးစံဖြင့် သူ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ကြောင်း ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာမှ နာရေးသတင်း ထုတ်ပြန် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင် အကြောင်းကို ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး တဦးဖြစ်သူ သခင်ချန်ထွန်းကို ဆက်သွယ်ကာ သတင်းထောက် မေကျော်က မေးမြန်းထားပါသည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း မောင်မောင် ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ ကြားပါတယ် ဘဘ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမိုင်းမှာ သူဟာ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။
ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်က စစ်ကြိုခေတ် ကျောင်းသား ဘဝတုန်းကတော့ အင်္ဂလိပ် တော်လှန်ရေးကို ကျောင်းမှာ စပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းတို့၊ ဦးဘဆွေတို့၊ အဲလို ဆက်ပြီးတော့ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ ဖွဲ့ပြီးတော့ Underground (မြေအောက်) ပေါ့လေ။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပေါ့။ အဲဒီတုန်းကစပြီး လုပ်လာခဲ့တယ်။
နောက် (မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်) ဘီအိုင်အေ တို့၊ ဘာတို့ထဲ ရောက်လာတော့ ဘီအိုင်အေထဲ ဝင်တယ်။ အဲဒီကနေ တောက်လျှောက် စစ်တပ်ထဲမှာ ဝင်တယ်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ သူက မန္တလေးမှာ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူးပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ သူက ဗိုလ်မှူးကြီးကနေ တက်ပြီးတော့ ဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေ ပြန်ကြတဲ့အခါ သူက တက်ပြီးတော့ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။
အဲလို မဖြစ်ခင်ကတော့ တပ်မတော်မှာ အတွင်းရေးမှူးပေါ့၊ စစ်အတွင်းဝန်ပေါ့။ အဲဒီကနေ တိုင်းမှူးလုပ်တယ်။ တိုင်းမှူးလုပ်တဲ့ အခါရောက်တော့ ၁၉၄၉ ကရင်တွေက အထက်ဗမာပြည် သွားသိမ်းတဲ့အခါ ရောက်တော့ ပျဉ်းမနား စစ်ကြောင်းမှာ အဖမ်းခံရတယ်။ သူနဲ့အတူ စစ်ဗိုလ်တချို့ပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ နောက်ဆုံး တိုက်ရင်းခိုက်ရင်းပေါ့လေ၊ တောင်ငူ-ထန်းတပင် ဘက်ကနေပေါ့လေ။ သူတို့ကို တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီက ရန်ကုန်ဘဆွေတို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးတို့၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းတို့က လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်တယ်။ ရန်ကုန်ဘဆွေနဲ့ အဖွဲ့ပေါ့။ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်လောက် ကြိုးစားတော့ သူက အောင်မြင်ပြီးတော့ လွတ်လာတာပေါ့။ လွတ်လာတော့ တပ်မှာပြန်ပြီး တာဝန်ပေးတော့ နောက်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖြစ်တာ။
၁၉၅၉ ခုနှစ် Care Taker အိမ်စောင့်အစိုးရ လက်ထက်မှာ သူက အထူးအရာရှိ ပြည်ထဲရေး ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီမှာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးက ဦးခင်မောင်ဖြူနော်။ ဦးခင်မောင်ဖြူက နာမည်ခံပဲ။ တကယ်က ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်က အကုန်လုံးကို တာဝန်ခံပြီးတော့ အဲဒီတုန်းကတော့ ပမညတ တွေရော၊ ကွန်မြူနစ် အနွယ်တွေရော အကုန်ဖမ်းတာပဲ။ နောက်ဆုံး ကိုကိုးကျွန်းတို့ ဘယ်တို့ ပို့တဲ့ထိအောင် သူက စီမံတာ။ အဲဒါတွေကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့လေ။ ရာဇဝင်က။
နောက် Care Taker အစိုးရကို ဦးနေဝင်းက ပြန်အပ်လိုက်တယ်။ အပ်လိုက်ပြီးတော့ ၁၉၆ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တော့ သူက ဦးနေဝင်းက စစ်တပ်ကနေ ဘက်မလိုက်ဖို့ လုပ်ပေမယ့် သူ (ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်) က တည်မြဲဘက်ကိုး။ တည်မြဲ သန့်ရှင်းကွဲတာကိုး။ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့က တဖက်၊ ဦးနုတို့က တဖက်ပေါ့။ အဲတော့ ဆွေငြိမ်း အုပ်စုနဲ့ နုတင် အုပ်စု ဆိုပြီး ၂ အုပ်စုကွဲတာကို သူက ဆွေငြိမ်းဘက်ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ အားပေးတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ သန့်ရှင်း ဖဆပလ က အပြတ်အသတ် နိုင်တာကိုး။ အဲလို နိုင်လိုက်တဲ့အခါ ဦးနေဝင်းက ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်နဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ရွှေပေါ့လေ၊ နောက် ဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်ဝင်းတို့၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ချစ်ခိုင်တို့ အစရှိတဲ့ တည်မြဲကို ထောက်ခံတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို သူက ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်။
အဲဒါကို ဦးနုက ပြန်ပြီးတော့ စီစဉ်ပေးပါ ဆိုလို့ပြောတော့ သူက ပြန်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က စစ်တပ်ကို သူတို့က ကိုင်လာတာ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ သန့်ရှင်း ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်တွေက ဦးနုတို့ကပေါ့နော်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်နဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ရွှေကိုတော့ သံအမတ်ပေးပါလို့ ပြောတော့ အဲဒါကို သူကလည်း သဘောတူတော့ သူတို့ သံအမတ် ဖြစ်သွားတယ်။
ကျန်တဲ့ ဦးချစ်ခိုင်တို့ ဘာတို့ကတော့ အရပ်သားတွေအနေနဲ့ ကျန်ခဲ့တာကိုး။ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်မြင့် တို့ကတော့ အဲဒီတုန်းက ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၁၉၆ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တည်မြဲဘက်လိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြုတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ ပါခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းရောက်တော့ သူက သံအမတ်ကြီးအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသွားတယ်။ နောက် အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ အချိန်ရောက်တော့လည်း နေရာပေးပါသေးတယ် သူ့ကို။
၁၉၇၄ လောက်ရောက်တော့ အကုန်လုံးပေါ့လေ။ ဦးအောင်ရွှေ့လည်း အဲဒီတုန်းက သံအမတ်ပေးတာပဲ။ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်လည်း ပေးတာပဲ။ ဦးနုက ပေးချင်တယ်။ ဦးနေဝင်း ကလည်း သဘောတူတယ်။
၁၉၇၄-၇၅ လောက်မှာ ပင်စင်ယူလာရတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သူ အရောင်းအဝယ် လုပ်သေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တာနဲ့ သူ့အကျင့်က သိပ်မကိုက်တော့ သူဘာမှ မလုပ်ဘဲ နားလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ သေသည်အထိ နေသွားတယ်လို့ ကျနော် အဲလိုပဲ နားလည်ပါတယ်။
သူနဲ့ ဦနေဝင်းရဲ့ နောက်ပိုင်း ဆက်ဆံရေးကရော ဘယ်လိုအနေအထားမျိုး ဖြစ်သွားပါသလဲ ဘဘ။
နောက်အာဏာသိမ်းတာကျတော့ ဗိုလ်နေဝင်းက သူတို့ကို အသိမပေးတော့ဘူး။ အရင်တခါ သိမ်းတုန်းကတော့ ပါတာပေါ့။ ပထမ တခါတုန်းက ဦးနေဝင်းက မသိခဲ့ဘူး။ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်တို့က သိမ်းခဲ့တာ။ တည်မြဲကို ထောက်ခံတဲ့ ဘက်က။ နောက်တော့ ဗိုလ်ချစ်ခိုင်တို့၊ ဗိုလ်အောင်ရွှေတို့ ပါတာ ဗိုလ်ကြည်ဝင်းတို့လေ။
ဗိုလ်အောင်ကြီးကတော့ သူက တည်မြဲရော၊ သန့်ရှင်းရော ဝင်ထွက်နေတဲ့သူ။ သူတို့က အဲလို အာဏာသိမ်းချင်တဲ့ သဘောနဲ့ ဦးနုဆီသွား အာဏာတောင်းတယ်။ အဲဒါကို ဦးနုက မင်းတို့ အဲလိုတော့ အာဏာမသိမ်းပါနဲ့။ အာဏာတောင်းတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ကြီးရယ်၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ရွှေရယ်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်ရယ်။ သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။
ဒါနဲ့ ဦးနေဝင်းဆီ စာရေးပေးမယ်ဆိုပြီး ဦးနုကနေ စာရေးပေးတယ်။ ဦးနေဝင်းကလည်း တခါ စာပြန်တယ်။ အဲဒီ စာနှစ်စောင်ကတော့ အာဏာယူပါ။ အာဏာကို ခေတ္တ ထိန်းထားပါဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရေးထားတာပါ။ ဦးနေဝင်းကလည်း သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရေးထားတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ကြီးတို့၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ရွှေတို့၊ နောက် ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်တို့ကနေ ဦးနေဝင်းက သဘောတူလိုက်တော့ Care Taker Gov (အိမ်စောင့်အစိုးရ) ဆိုပြီး လုပ်ကြတာ။ အိမ်စောင့် အစိုးရဆိုပြီး ဖွဲ့လိုက်ကြတာ။ အဲဒီ အိမ်စောင့်အစိုးရမှာ လူထုက နည်းနည်းပါးပါး လက်ခံကြည်ညိုတဲ့ ဦးခင်မောင်ဖြူတို့ ဘာတို့နဲ့ အိမ်စောင့်အစိုးရကို ဖွဲ့လိုက်တာ။ အဲဒီနောက်တော့ ၁၉၆ဝ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်က ပြည်ထဲရေး အထူးအရာရှိ။ အဲဒီ အိမ်စောင့်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ဝန်ကြီးကို ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဖေကိုပဲ ပေးတာ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဆိုပြီးတော့။
သူက တပ်ထဲမှာတုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ ပိုပြီး နီးစပ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တပ်တွင်း ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုများ ရှိပါသလဲ။
ကျောင်းသားထဲက တော်လှန်ရေးထဲ ပါလာတာ။ ဘီအိုင်အေတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူက စည်းကမ်းသိပ်ကြီးတဲ့သူ။ နောက် သူက ၁၉၄၇ ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ တပ်မတော် အတွင်းဝန် ဖြစ်တာ။ အဲလို အင်္ဂလိပ်ရှိတုန်း ဖြစ်တာ။ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က စစ်ဗိုလ်တွေက ရာထူးခပ်ကြီးကြီးတွေ တော်တော်များများ ယူထားကြတာ။ သူက စစ်တပ်မှာ အတွင်းဝန်လို ဖြစ်သွားတာ။ စစ်တပ်ကို ဗမာက လွတ်လပ်ရေးရတော့ စစ်တပ်က အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တွေက ထွက်တာ။ ထွက်တော့ တပ်တခုမှာ ဗိုလ်မှူး ပက်ထရစ် ဖိုးလှ။ သူက ဗိုလ်မှူး၊ အင်္ဂလိပ်တပ်က ဗိုလ်မှူး။
ဗိုလ်ကြီး လှမြင့်က အရင်တုန်းက ကျောင်းသားတွေကတော့ ဘဲလ်ယားလှမြင့် လို့ ခေါ်တာပေါ့လေ။ ဗိုလ်ကြီး လှမြင့်က အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်ကြီး၊ တပ်ခွဲမှူးပေါ့။ ဒုတပ်ရင်းမှူးပေါ့နော် ပက်ထရစ် ဖိုးလှက။ အဲဒီမှာ တပ်ရင်းမှူးက နိုင်ငံခြားပြန်တဲ့ အခါရောက်တော့ အင်္ဂလိပ်က သူ့နိုင်ငံကို ပြန်တယ်။
ရာထူးတိုးရင် ပက်ထရစ် ဖိုးလှက ရရမယ်။ ဒါပေမဲ့ မရဘူး။ အဲဒါ သူက ပက်ထရစ် ဖိုးလှက မရဘဲနဲ့ စက္ကရီတေရီ အနေနဲ့ သူက ဗိုလ်ကြီးလှမြင့်ကို တပ်ရင်းမှူး ခန့်တယ်။ ခန့်တော့ ပက်ထရစ် ဖိုးလှက သူသာ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ သူက မေဂျာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒုတပ်ရင်းမှူးလည်း ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးတော့ ဝင်ပြောတော့ သူက ငါ ခန့်ချင်ရာ ခန့်မယ်၊ You get out ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တယ်။ သူ့ကို ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ။ အဲဒီမှာ ပက်ထရစ် ဖိုးလှက အဲဒီမှာ အလုပ်က ပြုတ်လာတာ။
သူက ပြတ်တယ်ပေါ့။ လုပ်ချင်ရာကို လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။
“ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အရင်မလုပ်ဘဲနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မျှတမှုလည်းမရှိဘူး၊ တရားဝင်မှာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ကြေညာချက်တို့ဘာတို့ ထုတ်ပြီး ပြောသင့်တယ်တဲ့။ အဲလိုပြောလိုက်တယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မှာကြားချက်ကို ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုံးကြိုင်က တဆင့်ပြန်လည်ပြောပြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံးချိန်းနေ့ အားပေးသူများ စုစည်း
အင်းစိန်ထောင်ဝင်းအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကို ယနေ့ အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်ပေးမည်ဖြစ်ရာ ထောင်ပြင်ပ အင်းစိန်ဈေးတ၀ိုက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားပေးထောက်ခံသူအချို့ စုစည်းရောက်ရှိနေသည်ဟု မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ များက ပြောသည်။
လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာလည်း ယခင်နှင့်မတူ အင်အားပြလျက်ရှိကြောင်း မြင်တွေ့ခဲ့သူ အင်းစိန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကျော် ရုံးချိန်းတုန်းက အင်းစိန်ဈေးရှေ့က ဒေါ်စုကို အားပေးထောက်ခံသူတွေ ထိုင်ပြီး စုဝေးတဲ့ နေရာကို လုံထိန်းရဲတွေ သိမ်းပိုက်ထားတော့ အဲဒီနေရာမှာ မစုနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီတပတ်တော့ အဲဒီနေရာမှာ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံသူ (၃ဝ-၄ဝ) ကျော်လောက် စုပြီးထိုင်နေတာ တွေ့ရတယ်။ လုံထိန်းရဲတွေကိုတော့ အဲဒီ အင်းစိန်ဈေးရှေ့ နေရာအနှံ့ ဖြန့်ပြီး ချထားတာ စုစုပေါင်း (၃ဝဝ) ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ ပေါက်တောဝဘက် အခြမ်းမှာလည်း အင်အား ဒီလောက်ပဲရှိမယ်။ အင်းစိန်ရှေ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာတော့ အရပ်ဝတ် လုံခြုံရေးနဲ့ စွမ်းအားရှင်လို့ ယူဆရသူတွေချည်းပဲ ထိုင်နေကြတာ တွေ့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုတပတ် ထူးခြားချက်မှာ အင်းစိန်ခုံးတံတားပေါ်တွင် လုံထိန်းရဲ အယောက် (၂ဝ) ကျော်ခန့် တန်းစီ နေရာချထားပြီး ခုံးတံတားကျော်မည့်သူများထဲမှ မသင်္ကာသူများကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေကာ ခုံးကျော်တံတားအောက်က ဖြတ်သန်းသူများကိုလည်း စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။
အင်းစိန်ဈေး အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် လုံထိန်းကား (၆) စီးနှင့် လမ်းတဖက်တချက်တွင်လည်း လုံထိန်းကား (၄) စီးရပ်ထားပြီး ရဲများက လမ်းများပေါ်တွင် ဖြန့်ကြက်နေရာယူထားကာ လမ်းကြိုလမ်းကြားတို့၌လည်း ရဲများကို နေရာချထားကြောင်း၊ အင်းစိန်ဈေးရှေ့မှ ထောင်ဘူးဝသွားသည့်လမ်းကိုမူ ယခင်ကဲ့သို့ သံဆူးကြိုးကာ ပိတ်ဆို့ထားပြီး ရဲများက စောင့်ဆိုင်းနေသည်ဟု သိရသည်။
အင်းစိန်မြို့ခံတဦးက အင်းစိန်ဈေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဈေးသည်၊ ဈေးဝယ် ခြောက်သွေ့နေပြီး လုံထိန်းရဲ၊ အရပ်ဝတ်လုံခြုံရေး၊ စွမ်းအားရှင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူများသာရှိကြောင်း ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အခြေအနေမှာမူ ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာလှုပ်ရှားနေကြပြီး ထူးခြားမှု တစုံတရာ မတွေ့ရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးသို့ မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်ပါတီဝင်များက ယနေ့ သွားရောက်ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ရာတွင် စစ်အစိုးရလိုလားသူများက လူငယ်ပါတီဝင်တဦးအား ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု အပြီးသတ်လျှောက်လဲရက် ရုံးချိန်းနေ့တွင် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပြီးအပြန် ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခံရသူမှာ မန္တလေးတိုင်းအရှေ့တောင်မြို့နယ်မှ ကိုတိုးကြီးဆိုသူဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ အသွားကတည်းက ကြံ့ဖွံ့နဲ့ သတင်းတပ်ဖွဲ့အင်အား (၅၀) လောက်က စောင့်ကြည့်နေတာဗျ။ ကျနော်တို့ လူစုနဲ့သွားလာနေတုန်းမှာတော့ စောင့်ကြည့်နေတာပဲရှိတယ်ဗျ။ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပြီးအပြန် လူစုခွဲလိုက်တဲ့အချိန် ဆိုင်ကယ် ရပ်နားစခန်းမှာပဲ ကိုတိုးကြီးကို ၀ိုင်းထိုးကြတာဗျ။ လုပ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့ နာမည်တွေတော့ မသိရသေးဘူးဗျာ။ ကြံ့ဖွံ့တွေ တော့ပါတယ်” ဟု မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်အဖွဲ့ဝင် ကိုမြင့်မော်က ပြောသည်။
ကိုတိုးကြီးကို ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်သူများမှာ (၅) ဦးခန့်ရှိပြီး တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ အသားလွတ် ထိုးကြိတ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး ကိုတိုးကြီးက တစုံတရာပြန်လုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု သိရသည်။
၎င်းက “အခုချိန်အထိတော့ ရဲစခန်းတွေဘာတွေတော့ တိုင်ချက်မဖွင့်သေးဘူးဗျာ။ တိုင်းစည်းရုံးရေးအဖွဲ့နဲ့ ဗဟိုကို အကြောင်းကြားထားတယ်။ လူကြီးတွေရဲ့ သဘောထားအတိုင်း လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်သွားပါ့မယ်။ တကယ်တော့ ၀တ်ပြု တယ်၊ ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာအလိုက် လုပ်ခွင့်ရှိတာပဲဗျာ။ ဒါကို ရန်ရှာတာကတော့ ကျနော်တို့လူငယ်တွေကို ခြိမ်းခြောက်တာပဲ” ဟု ပြောသည်။
မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးသို့ မန္တလေးမြို့နယ်မှ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ် (၁၅) ဦး သွားရောက် ၀တ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ကြပြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ်အသီးသီးတွင်လည်း ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲများ ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာကို အာဆီယံကထုတ်ရန် အကြောင်းမရှိဟု
မြန်မာစစ်အစိုးရက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဖော်ဆောင်နေပါသည်ဟု ပြောဆိုနေပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းဆီးထားခြင်းသည် တရားဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဟု စစ်အစိုးရက အခိုင်အမာပြောဆိုနေသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စွဲဆိုထားသည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အာဆီယံက စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု မစ္စတာအဖိဆစ်က ပြောသည်။
၎င်းက “အာဆီယံနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ ရည်မှန်းချက်ခြင်းတူပေမယ့် မူဝါဒခြင်းတော့ တူချင်မှတူမှာပါ၊ အာဆီယံအနေနဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မူဝါဒကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးရမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
အခြားနိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချဉ်းကပ်ပုံသည် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့်ရှိကြသော်လည်း မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများကမူ မတူညီကွဲပြားသည့် ဆက်ဆံမှုနည်းလမ်းများဖြင့် ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်ကြရသည်ဟုလည်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ထည့်သွင်းပြောကြားသွားကြောင်း ထိုင်းသတင်းဧဂျင်စီတွင် ဖော်ပြသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၎င်း၏နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦး ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ တရားစွဲဆိုခြင်းခံနေရပြီး တရားခွင်တွင် နှစ်ဖက်သက်သေများ၏ လျှောက်လဲချက်များကို ယနေ့နောက်ဆုံး ကြားနာမည်ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရက ယခုကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးပြီး ရုံးတင်တရားစွဲဆိုထားသည့်အပေါ် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုနေကြသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၌ အသုံးပြုရန် အဆင်မပြေတော့သည့် အင်နယ်လော့ (Analog) ဖုန်းလိုင်းဟောင်းများအား ဒီဂျစ်တယ်စနစ် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးရာတွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းများက လာဘ်ငွေယူကာ ဖုန်းလိုင်းမရှိသူများအတွက် လည်း လိုင်းသစ်များချပေးနေသည်။
ယခင် ဖုန်းလိုင်းအဟောင်း (၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃) အစဂဏန်း သုံးစွဲနေသူများကိုသာ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးမည်ဟု ဆက်သွယ်ရေးဌာနက ကြော်ငြာထားသော်လည်း ဖုန်းလိုင်းမရှိသူများထံမှ ကျပ်ငွေ (၁၀) သိန်းယူပြီး နားလည်မှုဖြင့် ဖုန်းသစ်များ ချပေးနေကြောင်း မော်လမြိုင်မြို့၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်သားတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “(၁၀) သိန်းပေးရင် နားလည်မှုနဲ့ လုပ်ပေးနေတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ပဲ၊ ပွဲစားမလိုဘူး။ အဲဒါကြောင့် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမယ့် ကောင်တာမှာတောင် ‘လျှောက်လွှာလာရောက် တင်သွင်းခြင်း မပြုသူများ၏ လိုင်းဟောင်းများအား ဖြတ်ပစ်မည်’ ဆိုပြီးတော့ စာကပ်ထားတယ်။ ဆိုလိုတာက ကြိုးလဲဖို့ ပိုက်ဆံ (၄) သိန်းခွဲ လာမသွင်းရင် လိုင်းဟောင်းကို ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ လာမလျှောက်တဲ့လိုင်းတွေကို ပြန်ရောင်းတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
မြိုင်သာယာရပ်ကွက်မှ ဖုန်းလိုင်းများအတွက် ဒီဂျစ်တယ်စနစ် ပြောင်းလဲရာတွင် သတ်မှတ်နှုန်းမှာ (၄) သိန်းခွဲဖြစ်ပြီး လာရောက်တပ်ဆင်သည့်အချိန်တွင် ကေဘယ်လ်ကြိုးအရှည်ပေါ်မူတည်၍ နောက်ထပ် ကျပ်ငွေ (၂) သိန်းမှ (၃) သိန်းအထိ ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒီဂျစ်တယ်စနစ် လိုင်းပြောင်းရန် နောက်ဆုံးလျှောက်လွှာ တင်သွင်းရက်ကို ယခုလကုန်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ဖုန်းခလက်ကျန်များရှင်းရန် ကြန့်ကြာနေသည့်အတွက် သြဂုတ် (၁၅) ရက်နေ့အထိ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဖုန်းမရှိသေးသည့်အိမ်များအတွက် တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့်ကြေး ကျပ် (၁၀) သိန်းမှာ လိုင်းရရှိရန် အတွက်သာဖြစ်ပြီး အခြားကြိုးသစ်သွယ်ရန်အတွက် ထပ်ပေးရမည်ဖြစ်သဖြင့် (၁၀) သိန်းအထက် ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြားမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ဒီတလော ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ အတော်ကျယ်ကျယ်လေးကြားလာရတဲ့ အယူအဆတခုက “နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်တဲ့ အနုပညာပဲ” ဆိုတာပါ။ ဒါကို ဂျာနယ်တခုရဲ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာတွေ့ရသလို မောင်(ဦး)စူးစမ်းရဲ့ အင်တာဗျူးတခုမှာလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့တဆက်တည်း ဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ ယူဆနည်းက နအဖရဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဗမာပြည်မှာ နဂိုကလုံးဝလှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအဖို့ လှုပ်ရှားဖို့ခွင် (သူတို့အသုံးအနှုန်းအရဆိုရင် Space) ရတာပဲ၊ ဒါကိုမုချအသုံးချရမယ်။ လုပ်ငန်းအားလုံးဒီကနေ အစပြုရမယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေး၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အားလုံးအတွက် အစပြုချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်မြူလာထုတ်ပေးကြပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားဖို့ ခွင်ဆိုတဲ့အယူအဆကို တင်သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း မနည်းဘူး ဆိုတာကို သတိထားမိပါတယ်။
Friday, 24 July 2009 20:20 ဇာနည်ဝင်း .စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးပါက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးချဲ့မည်ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန်၏ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောဆို ချက်မှာ လုံလောက်သည့် ကမ်းလှမ်းချက် မဟုတ်ဟု အတိုက်အခံတို့က ယူဆနေကြသည်။
Search Move Close
အင်္ဂလိပ်ပိုင်းသို့ | Download Zawgyi Font ..ပင်မစာမျက်နှာသတင်းဆောင်းပါးအာဘော်
Friday, 24 July 2009 20:11 အေးလဲ့ .ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏အမှု နှစ်ဘက်အပြီးသတ် လျှောက်လဲ ကြားနာစစ်ဆေးသည့် ယနေ့တွင် အင်းစိန်မြို့နယ် အနီးတဝိုက်၌ လုံခြုံရေး အထူးတင်းကျပ်ထားပြီး သူ လွတ်မြောက် ခွင့်ရရန် မေတ္တာပို့၊ ဆုတောင်း သူများကိုပါ အာဏာပိုင်များက အနှောင့်အယှက်ပြုကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့နံနက်က ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရန် ဆုတောင်းခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အဖွဲ့ဝင်များကို အာဏာပိုင်များက အနှောင့် အယှက်ပြုကြောင်း NLD အဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့ ရှိ NLD လူငယ်တချို့တို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဝန်းအတွင်း ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ပြီး အပြန်တွင် NLD လူငယ်တာဝန်ခံ ကိုတိုးကြီးကို ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့က ဝင်ရောက် ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် နံရိုးတွင် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့ရှိ NLD လူငယ် တာဝန်ခံတဦးက “ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင် လူငယ်တွေ ဆုတောင်းပြီး အပြန်မှာ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ ရဲတွေ အယောက် ၅၀ လောက်က ကျနော်တို့ကိုဝိုင်းထားပြီး ကိုတိုးကြီးကို သူတို့ လေး၊ ငါး ယောက် လောက်က ဝိုင်းထိုးကြတယ်၊ တယောက်က ကန်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မန္တလေး အရှေ့တောင်မြို့နယ် NLD ယာယီ ဆက်သွယ်ရေးရုံးတွင်လည်း မြို့နယ် ဥက္ကဌ ဦးကျော်ရွှေ၊ အတွင်းရေမှူး ဦးချစ်ရင် နှင့် မြို့နယ်စည်းရုံးရေးမှူး တို့ကလည်း စုပေါင်းကာ မေတ္တာပို့ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်နော်အုန်းလှအပါအဝင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အင်္ဂါနေ့တိုင်း ဘုရားဝတ်ပြု ဆုတောင်း နေကြ NLD အဖွဲ့ဝင် တချို့တို့သည်လည်း ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ အထိ် ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်ရှိ အဂါင်္ထောင့်၌ ပဌာန်း ရွတ်ဖတ် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ခဲ့ရာ ၎င်းတို့ မေတ္တာပို့နေချိန်အတွင်း အာဏာပိုင် များက စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီး အပြန်လမ်းတွင် ၎င်းတို့ စီးနင်း ခဲ့သည့် လိုင်းကားကို အာဏာပိုင်များက ၃ နာရီခန့်ကြာအောင် ခေတ္တ ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ရန်ကုန် NLD လူငယ်တဦးက “ကျနော်တို့ ရွှေတိဂုံဘုရားက အပြန် အာဇာနည် ကုန်းဘက်ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးထုတ်တဲ့ အင်းစိန်ထောင်ဘက် သွားဖို့ဆင်းလာတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ကျနော်တို့ နောက်ကို တောက်လျှောက်လိုက်လာပြီး ဘုရင့်နောင်လမ်းရောက်တော့ ကျနော်တို့ စီးလာတဲ့ အင်းစိန် လိုင်းကားကို ခရီးသည်တွေကော အားလုံး၊ ချောဆွဲသလို ဘုရင့်နောင် ရဲစခန်းကို မောင်းသွား တယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းလိုင်းကားပေါ်မှ ဒေါ်နော်အုန်းလှ အပါအဝင် NLD အဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးကို ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များ တောင်းယူကာ ၎င်းတို့ သွားနေသည့် ခရီးစဉ်များကို စစ်ဆေး မေးမြန်းပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်သည် ဟုသိရသည်။
အလားတူပင် မိထ္ထီလာ၊ တွံတေး၊ ခရမ်း၊ သုံးခွ၊ မြင်းခြံ အစရှိသည့် မြို့နယ်များမှ NLD အဖွဲ့ဝင်များ တို့ကလည်း ဝတ်ပြု ဆုတောင်း ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့နံနက်က အင်းစိန်ထောင် အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံထိန်းရဲအင်အား ရာပေါင်းများစွာနှင့် စွမ်းအားရှင် ရာပေါင်းများစွာကို တိုးမြှင့်ချထားသည့်ကြားမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထောက်ခံအားပေးသူ ၂၀၀ ကျော်ခန့်သည် အင်းစိန်ထောင်အနီးရှိ ထိပ်တန်းအပေါင်ဆိုင်အနီးတွင် စုရုံးခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ ချထားသော လုံခြုံရေးအင်အားသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှု စစ်ဆေးသည့် တလျှောက်လုံးတွင် အများဆုံးချထားသည့် အင်အားဟုဆိုနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် စွမ်းအားရှင်အရေအတွက် သိသိသာသာ တိုးမြှင့် ထားသည်ဟု မျက်မြင်သွားရောက် ကြည့်ရှုသူတဦးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် အလွတ်သတင်းထောက်တဦးက “လုံထိန်းရဲတွေလည်း တအားများတယ်။ အင်းစိန်ပန်းခြံ နားက မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန ရုံးရှေ့မှာ လုံထိန်းရဲကား ၆ စီး၊ အင်းစိန်ဈေးရှေ့ လှိုင်မြစ်လမ်းမကြီး ပေါ်မှာ ၁၅ စီးလောက် ရှိတယ်။ အချုပ်ကားလည်းပါတယ်။ ဒိုင်နာတွေ၊ ဘီအမ်တွေလည်း တော်တော်များ တယ်။ အင်းစိန်မီးရထားဝန်းထဲမှာလည်း ရပ်ထားတဲ့ လုံထိန်းကားတွေ၊ အရပ်ဝတ်ရော၊ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲရော အင်အား အပြည့်ပဲ” ဟု ဆိုသည်
လုံခြုံရေးအင်အားတိုးမြှင့်သည့်အပြင် အင်းစိန်ထောင်နှင့် ဈေးအနီး သွားရောက်မည့် သူများကို အင်းစိန် ခုံးကျော်တံတားထိပ်တွင် ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲများချပြီး စစ်ဆေးနေသည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
ထို့ပြင် NLD အဖွဲ့ချူပ်ရုံး တည်ရှိရာ ရွှေဂုံတိုင်အနီးတဝိုက်တွင်လည်း လုံထိန်းအင်အားများ တိုးချဲ့ချထားပြီး ရွှေဂုံတိုင်မီပွိုင့် နှင့် ရွှေဂုံတိုင်ဆက်သွယ်ရေးစခန်း အနီးတွင် လုံထိန်းရဲကား ဆယ်စီးခန့်ရပ်တန့်ကာ လုံခြုံရေးယူထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်အနီးရှိ လမ်းသွယ်နှင့် လမ်းမများအားလုံးကိုလည်း ပိတ်ထားပြီး အရပ်ဝတ်ရဲများနှင့် စွမ်းအားရှင်များ စခန်းချရာ အင်းစိန်မြို့မဈေး အပေါ်ထပ်တွင် ၀ါးရင်းတုတ်များ သိမ်းဆည်းထား သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရကြောင်း အင်းစိန်ဈေးသား တဦးကပြောသည်။
စွမ်းအားရှင်များသည် စက်မှုဇုန်ထုတ် လိုက်ထရပ်ကားများ၊ ဘီအမ်ကားကြီးများနှင့် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မှော်ဘီ၊ ထောက်ကြံ့နှင့် မြို့စွန်ဒေသများမှ ခေါ်ယူထားသူများဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်အနီး လှိုင်မြစ်လမ်းမကြီး ပေါ်တွင် သံဆူးကြိုးဘယ်ရီယာများချထားပြီး လုံထိန်းရဲအများစု သည် လက်နက်အပြည့်အစုံ ကိုင်ဆောင်သူ အရေအတွက် က ပိုမိုများပြားကြောင်း သိရသည်။
ဤသတင်းအား ဧရာဝတီသတင်းထောက် အောင်သက်ဝိုင်း ပါဝင်ရေးသားသည်။
Friday, 24 July 2009 17:47 ရန်ပိုင် .ဧရာဝတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များက ပြည်ပ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ INGO များ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားလျှင် ၎င်းတို့ စားရေ ရိက္ခာ အခက်အခဲ ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြကြောင်း ဒေသခံများ ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
“နိုင်ငံခြား အကူအညီအဖွဲ့တွေ ပြန်သွားရင်တော့ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေ စားရေရိက္ခာ အခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်” ဟု လပွတ္တာမြို့ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီမှ ဒေါက်တာ အေးကြူ က ပြောသည်။
ယင်း မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် လပွတ္တာမြို့တွင် လက်ရှိ နိုင်ငံခြား အကူအညီပေးရေးလုပ်သား အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိ နေပြီး ယခုအချိန်အထိ နောက်ထပ် တဦးတလေမျှ ရောက်ရှိ မလာသေးကြောင်း၊ ဤ ဒေသများသည် မုန်တိုင်း ဒဏ်ကို အဆိုးဝါးဆုံးခံ ရသော ဒေသများဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ ၁ နှစ်ကျော်လာခဲ့သော်လည်း ဒေသခံ အများစုသည် ဘ၀ရပ်တည်မှုအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်နေရဆဲ ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
“တချို့လည်း မြစ်ချောင်းထဲမှာ ငါးရှာ၊ ဖားရှာပေါ့၊ တချို့လည်းမနက်ဆို ငွေလိုက်ချေးနေတာကို တွေ့မြင်ရတယ်” ဟု ဒေါက်တာအေးကြူ ကပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်( WFP ) ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းတွင် လပ္ပတ္တာ နှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ်များ၌ ကောက်ခံခဲ့သော စစ်တမ်း၌ လူဦးရေ၏ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ များကို မှီခိုနေရဆဲဖြစ်ပြီး၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် စီးပွားရေးပြန်လည် ထူထောင်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားကြောင်း လူဦးရေ ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆန်ကို အကြွေးဖြင့်ဝယ်စားနေရကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရ က ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ပြည်ပအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များထက် ပြည်တွင်း NGO အလုပ်သမား များ ကို ငှားရမ်းအသုံးပြု လိုသောကြောင့် ပြည်ပအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များစွာ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြောင်းလည်း သိရသည်၊၊
“ပြည်ပNGO အဖွဲ့တွေ တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်ထွက်သွားနေကြတာပဲ၊ အသစ်ပြန်လာတဲ့ သူကသိပ်မရှိ တော့ဘူး၊ တကယ်တမ်းလုပ်ငန်း တွေကလည်း ဘာမှမပြီးသေးဘူး၊ NGO အဖွဲ့တွေသာ ထွက်သွားရင် သိပ် မလွယ်ဘူး၊ အင်ဒိုနီးရှား အာချေးပြည်နယ် အခြေအနေနဲ့ အရမ်းကွာတယ်”ဟု ဒေါက်တာအေးကြူ က ပြော သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များက ပြည်ပ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားလျှင် သူတို့၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် စိုးရိမ်နေသကဲ့သို့ ၊ အစိုးရကလည်း အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များ ထွက်ခွာ သွားလျှင် ၄င်းတို့နှင့်အတူ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသမှ သတင်းများပါသွားမည်ကို စိုးရိမ်နေသည်ဟု သိရသည်။
ပြည်ပအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ ၂၀၀ ခန့်သည် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ အခက်အခဲကြောင့် ကြန့်ကြာနေသည် ဟု ကုလသမဂ္ဂ ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အာဆီယံအသင်းတို့ ဖွဲ့စည်းထားသည့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဗဟိုအဖွဲ့( TCG ) မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ဗီဇာကန့်သတ်ရခြင်းမှာ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ရုံးတင် တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် သူမအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တောင်းဆို ဝေဖန် ခဲ့သောကြောင့် စစ်အစိုးရ ၏ တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု TCG အဖွဲ့ နှင့်နီးစပ် သော သတင်းများအရ သိရသည်။
မုန်တိုင်းသင့် ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို သုံးနှစ်ကြာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ နီးပါး လိုအပ်မည်ဟု သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့က ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလဆန်းက ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ တွင် တိုက်ခတ်ခဲ့ သော နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် လူဦးရေ တစ်သိန်းလေးသောင်းခန့် သေကျေပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Friday, 24 July 2009 17:04 သန်းထိုက်ဦး .ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်သော ကရင်ရွာသားများသည် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA) က တပ်သားသစ် စုဆောင်းမှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးနေကြရ သည် ဟု ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များက ပြောဆိုသည်။
Thailand Burma Border Consortium (TBBC)အဖွဲ့၏ ယမန်နေ့ ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထဆောင်ယမ်းမြို့နယ် ဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာသူပေါင်း ၂၀၀ ရှိသည်ဟု အဆိုပါကြေညာချက်တွင် ရေးသားထားသည်။
“DKBA တပ်များက တပ်သားသစ် စုဆောင်းခြင်း၊ ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ ငွေကြေးရိက္ခာ တောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်နေသော သ တင်းများ ရရှိနေသည်” ဟု ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက် ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (TBBC)၏ ယမန် နေ့က ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ သတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ အူးသူထ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၅၁၇ ဦး ထပ်မံ ရောက်ရှိလာကြောင်း လယ်ပေါ်ဟဲ စခန်း ဥက္ကဌ စောတာစူးညားက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထွက်ပြေးလာသော ကရင်ရွာသား အများစုမှာ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အတွင်းရှိ မဲ့လာအားခီး၊ ၀ါးမီးကလာနှင့် ကျော်ကေးထကျေးရွာဒေသခံများဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၈၀ ခန့် ရှိကြောင်း ၎င်း စောတာစူးညားက ဆိုသည်။
ယင်း ဘားအံခရိုင်အတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA ပူးပေါင်း တပ်များက ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) လက်အောက်ခံ KNLA တပ်မဟာ(၇) မှတပ် စခန်းများကို ဇွန် လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် နေရာ များလည်း ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးလာသည့် ကရင်ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်သည် မဲ့သဝေါနှင့် မဲ့သလေ မြို့နယ်များသို့ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြရသည်။
KNLA တပ်မဟာ (၇) နယ်မြေအတွင်းရှိ စခန်းများကျဆုံးပြီးနောက်တွင် DKBA နှင့်မြန်မာစစ်တပ်သည် KNLA တပ်မဟာ (၅) နှင့် KNLA တပ်မဟာ (၆) ၏ အခြေစိုက်စခန်းများကို တိုက်ခိုက်ရန် အာရုံစိုက်လာသည်ဟုလည်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မှလာသော သတင်းများနှင့် လေ့လာသူများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တလျှောက်တွင်ရှိသော KNU လက် အောက်ခံ KNLA ထိန်းချုပ်ရာဒေသများကို အပြီးသတ်ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ် ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ အပြီးသတ်ရှင်းလင်းခြင်းမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက တပ်ရင်းတရင်းတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၂၆ ဦးပါဝင်သည့် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် DKBA က နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် တပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်များ ကို အဓမ္မ စုဆောင်းမှုများပြုလုပ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရထံသို့ KNLA တပ်မဟာ ( ၆ ) တပ်ရင်း (၁၈ )မှ တပ်ခွဲ မှူး ဗိုလ်မှူး ၊ ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ရှိ စောလေးကယ် အပါဝင် စုစုပေါင်း ၂၂ ဦး လက်နက်ငယ် ၈ လက်၊ ခဲယမ်း မျိုးစုံနှင့် အတူ လက်နက် စွန့်လွှတ်ပြီး ဥပဒေ ဘောင်အတွင်း ၀င်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ဖော်ပြချက် နှင့် ပတ်သက်၍ KNU တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်မှူး စောလှငွေကမူ ၎င်း၏ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူများကို လိုက်လံမေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ လက်နက်ချသည့် ဖြစ်စဉ် တစုံတရာ မရှိခဲ့ကြောင်း လုပ်ကြံဖန်တီးထား သည့် သတင်း ဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
“သူတို့ဘက်မှာလည်း လက်နက်ချတာတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သူတို့ဖန်တီး လုပ်ယူတာဖြစ်တယ်”ဟု ၎င်း က ဆိုသည်။
နအဖ ထံသို့ သွားရောက်ပူးပေါင်းသူများသည် တဘက်နိုင်ငံ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း၌ နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြောင်း ၎င်း တို့သည် ပြည်ပ အထောက်အပံ့များကိုယူ၍ အဆင်ပြေပြေနေထိုင်လျက်ရှိသော်လည်း လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ကိုယ့်ရိက္ခာ ကိုယ်ရှာဖွေ စားသောက်နေရပြီး အခက်အခဲများရှိသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဥပဒေဘောင် အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကျဉ်းထောင်ထဲက တံခါးပိတ်တရားခွင်မှာ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေက ဒီကနေ့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲတဲ့ နေရာမှာ ဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံချေပခွင့် ပြည့်ပြည့်၀၀ မရခဲ့တာတွေကိုပါ အလေးထား တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာလည်း ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့တာပါ။ ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ ရန်ကုန် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် တ၀ိုက်မှာတော့ လုံခြုံရေးတွေ ထူထူထဲထဲ ချထားတဲ့ကြားက ရာနဲ့ချီတဲ့ သူ့ကို အားပေးထောက်ခံသူတွေလည်း ဒီကနေ့ စုဝေးရောက်ရှိလာကြတာပါ။ တရားခွင် နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦး က အစီရင်ခံထားပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အမိန့်ကို ချိုးဖောက်တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ တရားစွဲဆိုတာတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမှုအတွက် နှစ်ဖက် ရှေ့နေတွေ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်တွေ တင်သွင်းကြဖို့ ရှိပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ခုခံချေပသူတွေ ဖက်ကသာ လျှောက်လဲဖို့ အချိန်ရခဲ့တာပါ။ မွန်းလွဲပိုင်းက စတင်တဲ့ တရားခွင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကြည်ဝင်း ရဲ့ လျှောက်လဲချက်တွေကို တရားခွင်က ကြားနာအပြီး တရားလိုအဖြစ် စွပ်စွဲထားသူတွေဖက်က အပြီးသတ် လျှောက်လဲဖို့ကိုတော့ ရှေ့တပတ် တနင်္လာနေ့ မနက်ကို ပြန်ပြီး ချိန်းဆိုလိုက်တာလို့ အင်းစိန် ထောင်တွင်း တရားခွင်ကို ရောက်သွားတဲ့ ရှေ့နေတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်း က ပြောပါတယ်။
“ဦးကြည်ဝင်း လျှောက်လဲချက်ပေးတော့ ၄ နာရီ ထိုးပြီးသွားပြီ။ စတာက ၂ နာရိကိုး။ အဲဒီတော့ ၄ နာရီခွဲ ဆိုတော့ ရုံးချိန်ကုန်သွားလို့ ဆိုပြီးတော့ ၂၇ ရက်နေ့ ၁၀ နာရီကို ပြန်ချိန်းလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဟိုဘက်က ၂၇ ရက်နေ့ကျမှ ပေးကြမှာပေါ့။”
ဒီလို လျှောက်လဲတဲ့ နေရာမှာတော့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ခြံဝန်း အတွင်းကို တိတ်တဆိတ် ရေကူးဝင်ရောက်လာတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတဦးကို လက်ခံထားတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ တရားစွဲဆို အပြစ်ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေက ခုခံချေပခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ လျှောက်လဲချက် တင်သွင်းတဲ့ နေရာမှာ တရားရုံးတင် စစ်ဆေးမှု ကာလတလျှောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖက်က ဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံချေပနိုင်ခွင့်တွေ ပြည့်ပြည့်၀၀ မရနိုင်တာတွေကို ရှေ့နေတွေက လျှောက်လဲခဲ့သလိုပဲ၊ အခုနောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်တွေ အပြီးမသတ်နိုင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျေနပ်မှု မရှိတဲ့အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်း က ပြောပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာ တုန်းကလည်းပဲ တရားလိုအဖြစ် တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင်တွေဖက်က သက်သေတွေ ၁၄ ဦးအထိ တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ရှေ့နေတွေ ဖက်ကတော့ သက်သေအဖြစ် ၄ ဦး တင်သွင်းထားတဲ့ နေရာမှာ ၂ ဦးသာ ထွက်ဆိုခွင့် ရခဲ့တာပါ။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အဲန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင် တို့ကိုတော့ တရားရုံး အဆင့်ဆင့် အထိ တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ပယ်ချခံခဲ့ရတာမို့ ဒါဟာ မျှတမှု မရှိဘူးလို့ ရှေ့နေတွေက ပြောဆိုထားကြတာပါ။ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်တွေ ပေးရမယ့်နေ့ ထောင်တွင်း တရားခွင်ကိုတော့ ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ နဲ့ နော်ဝေး နိုင်ငံက သံတမန်တွေကို တက်ရောက် အကဲခတ်ခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့အမှု အဆုံးသတ် လာတော့မယ့် အချိန်ကလည်း နီးလာတာမို့ တံခါးပိတ်ကြားနာမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင် အနီးအနားကို သူ့ကို အားပေးထောက်ခံသူ အများအပြားလည်း အကဲခတ်ဖို့ ရောက်လာကြပါတယ်။ ထောင်အနီးအနား ရောက်သွားသူတွေထဲက ဥပဒေပညာရှင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ရှိန် ကတော့ လုံခြုံရေးတွေ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချထားတာတွေ ရှိပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အားပေး ထောက်ခံသူတွေ ရာနဲ့ချီပြီး ရောက်လာကြတာလို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီမှာမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ စုစုပေါင်း လူ ၁,၀၀၀ လောက်ရှိမယ်။ ပျမ်းမျှပြောရရင်တော့ ၆၀/၄၀ လောက်ရှိမယ်။ ၆၀ % ကတော့ pro (ထောက်ခံသူ) ပေါ့။ ကျန်တာ ၄၀ % ကတော့ တဖက်ကပေါ့။ လုံခြုံရေး အနေနဲ့ကတော့ ကားတွေ အတော်များတယ်။ လုံခြုံရေးကားတွေ။ အင်းစိန်ဈေးလမ်းမကြီး ရဲ့ ဈေးဘက်ခြမ်းမှာ၊ နောက်တခါ ဒီဘက်မှာ ပရိသတ်တွေ ရှိနေတဲ့ဘက်မှာလည်း ကား ၄ စီးလောက် ရှိတယ်။ ဒီမှာ လမ်းသွယ်တွေ အားလုံးထိပ်မှာ အကုန်လုံးကို လုံခြုံရေး ချထားတယ်။ သံဆူးကြိုးတွေလည်း ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် အနီးအနား ဆေးရုံထဲမှာ လုံခြုံရေးတွေ ချပြီးတော့ ဌာနချုပ်သဘောမျိုး လုပ်ထားတယ်။ အားပေးထောက်ခံတဲ့သူ အနေနဲ့ကတော့ မြို့နယ်တွေက တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီမှာ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်တွေ လာတယ်လေ။ နယ်တွေကပါ လာတယ်။ အဲဒါတွေ တွေ့ရတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းစေ့ကာနီးမှ ဥပဒေ ချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုပြီး တရားစွဲဆိုတာတွေ လုပ်နေတာကြောင့်လည်း ဒါဟာ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေဖက်က ဆောင်ရွက်မှု တခုအဖြစ် သံသယတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ရှေ့နှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ စစ်အစိုးရက ကမကထလုပ် ကျင်းပဖို့ ရှိနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မပါဝင်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်နေတာလို့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတွေ မဖော်ဆောင်နိုင်ဘဲ ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတာကို ကုလသမဂ္ဂလို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက ပြောသင့်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ဖို့၊ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်ဖို့နဲ့ အစိုးရက ကျင်းပပေးဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ နိုင်ငံတကာက လက်ခံနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန် ကီမွန်း ကတော့ ဒီလဆန်းပိုင်းတုန်းကပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂ ရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့တာပါ။ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ထဲတုန်းက လုံခြုံရေးကောင်စီကို အစီရင်ခံတဲ့ နေရာမှာတော့ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ၊ မြန်မာပြည်သူတွေ မျှော်လင့်နေတာတွေ လိုအပ်နေတာတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်ပူပမ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လျစ်လျူရှုထားမလား၊ တိုင်းပြည်အကျိုး ရှေ့ရှုပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် သွားမလား ဆိုတာတွေကို ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေပါတယ် ဆိုပြီးတော့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က စစ်အစိုးရအပေါ် သတိပေး ပြောဆိုထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို နောက်ဆုံးလျှောက်လဲ ကြားနာမယ့် ဒီကနေ့မှာ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်းမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဆုတောင်းပွဲတွေကို ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ဆုတောင်းပွဲတွေ ကျင်းပရတာကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ ယုံကြည်ထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတွက် အနည်းဆုံး မြို့ကြီး ၂၀လောက်မှာ ဆုတောင်းပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ မနက်က ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ ရေနံချောင်းမြို့မှာ ရှိတဲ့ လာဘမုနိ မြတ်စွာဘုရားမှာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်တယ်။ သပြေပန်းက ၆၅ ခက်၊ ဖယောင်းတိုင် ၆၅ တိုင်၊ နံသာတိုင် ၆၅ တိုင် လှုဒါန်းပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးကို ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ မေတ္တာသုတ် ရွတ်တယ်။ မောရသုတ် ရွတ်တယ်။ ပဌာန်း၂၄ ပစ္စည်းကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ပေါ့။ သုံးကြိမ် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်တယ်။”
ရေနံချောင်းမြို့က တန်ခိုးကြီးဘုရား တော်တော်များများကို အာဏာပိုင်တွေက သော့ခတ်ထားပြီး ရဲနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်တွေက စောင့်ကြပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အစောင့်မရှိတဲ့ဘုရားကို သွားရောက်ခဲ့တာမို့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလိုဆုတောင်းရတာဟာ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ယုံကြည်နေတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကိုတင့်လွင့်က ဆက်ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်နေတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ အဲန်အယ်လ်ဒီ အတွက်ရယ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေအတွက် လုပ်နေတာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်တန်းဖြစ်နေတာက ပြည်တွင်းစစ်ပေါ့။ ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါကြီးကို ကုစားဖို့ရာ တိုင်းရင်းသားအများစုက လက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြီးတော့ ပါဝင်မှပဲ ဒီပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ ရရှိလာမယ်။ တချိန်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ် ကျဆုံးသွားခဲ့လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေက အခုလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာ။ အနာဂတ်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိရင် ဗိုလ်ချုပ် ရှိသကဲ့သို့ပဲ အနာဂတ်ဟာ သာယာဖြောင့်ဖြူးလိမ့်မယ်လို့ လူတိုင်းက လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အနာဂတ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်မှ သာယာညှင်းပြောင်းတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့က မြင်တယ်ဗျ။ ဒါက လူတိုင်းက လက်ခံယုံကြည်နေပါတယ်။”
မန္တလေးမြို့မှာလည်း ဒီနေ့မနက်က မဟာမုနိဘုရားကြီးမှာ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုတောင်းပွဲကို အဲန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ပြည်သူ ၁၀ ယောက်သာ တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေဘက်က လူ ၅၀ လောက် စောင့်ကြည့်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းယူခဲ့ပါတယ်။
အဲန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်တယောက်ကတော့ ဆုတောင်းပွဲကအပြန်မှာ အာဏာပိုင်တွေဖက်ကလို့ ယူဆရသူတွေက သူ့ကို ၀င်ရောက်ထိုးကျိတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဘုရားကန်တော့ပြီးလို့ ပြန်လာတဲ့အခါ လူစုလည်းကွဲရော ကျနော့်ကို ၀ိုင်းထိုးတယ်ခင်ဗျ။ သူတို့ထဲက လူပဲဗျ။ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ ရှေ့မှာ ထိုးတာ ကျနော့်ကို။ ဒါ ဥပဒေမဲ့တာပဲလို့ ကျနော်က ပြောလိုက်တာပဲ။ သူတို့ရဲ့ ရှေ့မှာ အထိုးခံရတာ သူတို့ ရဲ့ ၀စိဘတ် ပါတယ်လို့ပဲ ကျနော်ကတော့ ပြောချင်တာပဲ။”
မိုးကုတ်မြို့မှာတော့ သံဃာတော်တွေက ဦးဆောင်ပြီး ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်တာကြောင့် လူစုခွဲလိုက်ရတယ်လို့ မိုးကုတ်မြို့သား တယောက်က အခုလို ပြောပါတယ်။
ပထမ သံဃာထဲက ကိုယ်တော်နဲ့ မြို့ထဲကလူတွေ ပေါင်းပြီးတော့ ဘုရားတခုသွားမယ် လုပ်ပြီး ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနေ့ မိုးကုတ်ကို ဗိုလ်ချုပ် ခင်မောင်မြင့် ဆိုလား၊ လူကြီးခရီးစဉ် လာတော့ လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာ ဘုရားတိုင်း ဘုရားတိုင်း မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ လုံခြုံရေးတွေ အများကြီး စောင့်နေတဲ့အခါ ကျတော့ အဲဒါ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ အဲဒီဘုန်းကြီးကလည်း သူ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပြန်ပြီးတော့ အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ ၀တ်ပြုဆုတောင်း လုပ်လိုက်တယ်။ လူငယ်တွေကလည်း သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး သူတို့အိမ်မှာပဲ လုပ်ဖြစ်လိုက်တာဗျ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းအပြီးမှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းပြည်ခါနီးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား တယောက်က သူမ နေအိမ်အတွင်းကို ရေကူးဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် လုံခြုံရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ ရုံးတင် စစ်ဆေးခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ရှိကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ထိ ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန် ဝက်တုပ်ကွေး အခြေအနေဆိုး
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း ဝက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီမတိုင်ခင် တပတ်ကထက် ၂ ဆနီးပါး ပိုများတယ်လို့ ဗြိတိန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသတ်ဆေးတွေကို အရေးပေါ် လိုအပ်သူတွေ အနေနဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးလက်မှတ်မပါဘဲ အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ Hot Line ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်ပြီး တောင်းနိုင်သလို အင်တာနက်ပေါ်ကနေလည်း မှာယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်သစ်ကို ဗြိတိန် တုပ်ကွေးတိုက်ဖျက်ရေးဌာနက စတင်လိုက်တာနဲ့အတူ အခုလို ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့မှာ စတင်လိုက်တဲ့ အရေးပေါ် ဝက်တုပ်ကွေးဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဟာ စတင်အသက်ဝင်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဝင်ပြီးကြည့်သူတွေ များလွန်းတဲ့အတွက် ဂျမ်းဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဗြိတိန်မှာ H1N1 အမျိုးအစား ဝက်တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူပေါင်း ၈၄၀ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး သေဆုံးသူကလည်း ၃၀ ထက်မနည်း ရှိသွားပါပြီ။
ဝက်တုပ်ကွေး ကူးစက်သူတွေထဲမှာ အသက် ၁၄ နှစ်နဲ့အောက် ငယ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ရောဂါ အပြင်းအထန် အခံစားရဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
၂၄ ဇူလိုင် ရန်ကုန် ၊ ၊ညွန့် သက်ထားဦး
Old Man , Pick Pocket Arrested by Police
အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးအုန်းကြိုင် သည် မြောက်ဥက္ကလာမှ လှိုင်သာယာပြေးဆွဲနေ သည့် အမှတ် ၁၂၁ လ်ိုင်း ရှိဒိုင်နာ ယာဉ်ပေါ်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ က အမျိုးသားတစ်ဦး အားခါးပိုက်နှိုက် မှုကြောင့် မရမ်းကုန်း ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထားသည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
မြောက်ဥက္ကလာ မှ စီးနင်းလိုက်ပါ လာသူ ဦးအုန်းကြိုင်သည် လမ်းဝမှတ် တိုင်အရောက်တွင် ယာဉ်ပေါ်ပါ အမျိုးသားတစ်ဦးအားခါးပိုက်နှိုက်သည် ကို တွေ့ ရှိသောကြောင့် မရမ်းကုန်း စခန်းတွင် ရှာဖွေ
စစ်ဆေးရာ ဦးအေး ဆိုသူထံမှ ခါးပိုက် နှိုက်ထားသော ငွေ ငါးထောင်ကျပ်ကို သိမ်းဆည်းရမိသဖြင့်အမှု ဖွင့်အရေးယူထားသည် ဟု သိရသည်။
ယခုနှစ် မိုးတွင်းကာလ အစ ပိုင်းမှ စ၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရီးသည်တင် ကားများပေါ်တွင်ခါးပိုက်နှိုက်များ နှင့် အလစ်သုတ် သူပြေးသူများ ပေါများလာကြောင်း ၄၃ လိုင်းကားနောက် လိုက်တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
နေ့ စဉ် ခရီးသည်တင် ကားဖြစ် ဒဂုံမြို့ သစ်မြောက်မှ မြို့ ထဲသို့အလုပ်ဆင်းရသည့် ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်း
အမျိုးသမီးတစ် ဦးကလည်း “ဘတ်(စ)ကားပေါ်မှာ ခါးပိုက် နှိုက်တွေ ပေါလာတာတော့ အမှန် ပဲလွန်
ခဲ့တဲ့ ဆယ်ရက် လောက်က လမ်းကျယ်(ပလာဇာ) မှတ်တိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ ခါးပိုက် နှိုက်မှု ဆိုရင် ဆယ်နှစ်
ကျော်လောက်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ခလေး နှစ်ယောက် အခု မီးတွေ ကလည်း မလာတော့ မိုးရွာပြီး မီးပျက်
တဲ့ အချိန် ဆိုရင် တောင် ဒဂုံမှာ အိမ်ပေါ် တက်ပြီးတောင် လုယက်မှု တွေ ရှိတယ်”ဟုပြောသည်။
စစ်အစိုးရ လက်ထက် စားဝတ်နေရေး အကျပ်အတည်းဒဏ် ခံကြရသည့် ပြည်သူများမှာ နေ့ စဉ်
ထမင်း တစ်နပ် အတွက် အဆင်မပြေမှုများဖြစ်လာပါက ရာဇ၀တ်မှု နှင့် နှီးနွယ်သည့် အမှုများထိကျူး
လွန် လာသည် ဟု သိရသည်။
၁၂၁ ခရီးသည်တင်ကားပေါ်တွင် ခါးပိုက်နှိုက်မှု ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဦးအုန်းကြိုင်မှာ ယခင်က
ပြစ်မှု ဟောင်းမရှိ ဟုသိရသည်။ခါးပိုက် နှိုက် မှု ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဦးအုန်းကြိုင်သည် ထိုအမှု
ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူများ တွင် အသက်အကြီး ဆုံးဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွှေးကောက်မတိုင်မှီ ချမ်းသာရေး နအဖ အာဏာပိုင်များ ကြိုးပမ်းအားထုတ်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ယခုအခါ လာဒ်ပေး လာဒ်ယူမူနှင့် အတင်း ငွေကြေးကောက်ခံမူများ အထူး တိုးပွားလာနေသည်ဟု မောင်တော ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
ယခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွင်းက နအဖ စစ်တပ်မှ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ နယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေး လာပြီးနောက် ဘင်္ဂရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရသူ စစ်သား ၃ ဦးမှာ ယခုအခါ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သူတို့ ၏ ဆွေမျိုး တဦးက “သူတို့ကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ကို ရောက်သွားတယ် ဆ်ိုတဲ့အတွက် လိုက်ရှာတာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှာ မရှိတော့ဘူး။ ဗမာပြည်ကို ပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ကို တိတိကျကျ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ စစ်သားသုံးဦးမှာ ရသေ့တောင် အခြေစိုက် ခမရ ၅၃၈ မှ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ တပ်ရင်းမှ တပ်ခွဲ တခွဲ နယ်စပ်မှတ်တိုင်များကို ပလက်ဝ နယ်စပ်တွင် လာရောက် စစ်ဆေးစဉ် ထွက်ပြေးလာကြသူများ ဖြစ်သည်။
သူတို့ သုံးဦးစလုံးမှာ ရခိုင်အမျိုးသားများ ဖြစ်ကြပြီး ရသေ့တောင်မြို့နယ် ရွှေလောင်းတင် ကျေးရွာမှ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ သုံးဦးမှာ မောင်မောင်သန်း၊ စိုးထွေးနှင့်် သန်းဌေးလှိုင်တို့ ဖြစ်ပြီး အသက် (၂၀) ပတ်ဝန်းကျင် အရွယ်များ ဖြစ်ကြသည်။
“အခု သူတို့ သတင်းအစ အနပျောက်နေတော့ လာရှာတဲ့အခါ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှာ စုံစမ်းလို့ မရဘူး။ သူတို့ကို ဧပြီလအတွင်းက ဘင်္ဂလာ အာဏာပိုင်တွေက ထောင်သားတွေနဲ့ အတူ ဗမာဘက်ကို ပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗမာပြည်ဘက်ကလည်း ဘာမှ မိသားစုတွေ ဆီကို အကြောင်းမကြားတာကြောင့် သူတို့ ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ တိတ်ိကျကျ မသိရဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သူတို့ သုံးဦးကို ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ် ဘင်ဒရိုဘင်ခရိုင် ဟေရ်မာန် မောင်ရွှေစိန်ကျေးရွာတွင် ထွက်ပြေးလာပြီး အနားယူနေစဉ် ဘင်္ဂလာရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့က ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
သူတို့ထွက်ဆိုချက်အရ နယ်စပ်မှတ်တိုင် စစ်ဆေးနေစဉ် အတွင်း ကျည်ဘောက်များ ကျကျန် ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် အပြစ်ပေးခံရမည်ကို စိုးရိမ်၍ ထွက်ပြေးလာကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စစ်သား သုံးဦးဖမ်းဆီးမိခြင်းကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ သတင်းများကလည်း အဆိုပါ အချိန်က ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ကြသည်။
သူတို့၏ ဆွေမျိုးက “ဗမာပြည်ကို ပြန်ပို့လိုက်တာ မှန်ရင်တော့ သူတို့က လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်မူနဲ့ ထွက်ပြေးသွားသူတွေဆိ်ုတော့ သတ်ပစ်ချင်ရင် သတ်ပစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ကောင်း ချမှတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ သတင်း ဘာမှ မရတဲ့အတွက် သူတို့အပေါ် မိသားစုတွေက စိုးရိမ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သူတို့အား ဘင်္ဂရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစဉ် အဆိုပါ စစ်သားများထံမှ စစ်ယူနီဖေါင်းများမှ အပ မည်သည့် လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်များမှ ဖမ်းဆီး ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား မူဆလင် ၂၈ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသူ မူဆလင် ၂၈ ဦးကို ဘင်္ဂလာ ရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေက မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နယ်စပ်တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
သတင်းအရ တောင်ပြို တဘက်ကမ်းရှိ ခေါင်တုံးဒေသမှ ရော်ဘာခြံ တခြံကို ဘင်္ဂလာရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့မှ စီးနှင်းစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား မူဆလင်များ အနေဖြင့် အသစ် ထပ်မံ ပြုလုပ်ပေးနေသော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားများ ပြုလုပ်ရန် ၀င်ရောက်လာနေသည်ဟု သတင်း ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် ဘင်္ဂလာရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့မှ နယ်စပ်ကို အထူုး သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်နေစဉ် သူတို့အား ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတို့အား ဖမ်းဆီးပြီးနောက် တရားစွဲဆိုမည်လား မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မောင်းထုတ်မည်လားဆိုသည်ကို တိတိကျကျ မသိရသေးကြောင်း ဒေသခံ တဦးက ပြောဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော အပတ်ကလည်း မြန်မာနှင့် ထိစပ်နေသော နတ်ကျောက်ဆရီ မြို့နယ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ၀င်ရောက်လာသူ မူဆလင် ၃၆ ဦးကို ဘင်္ဂလာရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
Kaowao ဇူလိုင် ၂၄၊၂၀၀၉။
စံခလပူရီ ဇူလိုင်-၂၄ ။ ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်၌ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အာဏာပိုင်များ ဝက်တုတ်ကွေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာကျောင်းသားများ အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်နေကြရကြောင်း မေးမြန်ချက်များအရ သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့မှနေ၍ ကီလိုမီတာ ၂၀ ခန့်သာဝေးသော ထိုင်းနိုင်ငံစံခလပူရီမြို့ အထက်တန်းကျောင်းသို့ ကျောင်းလာတက်နေသူ မင်းမွန်စိုက်က “ထိုင်းဘက်ကိုကျောင်းလာတက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဘုရားသုံးဆူမြို့အိမ်ကို မပြန်ကြရတော့တာ ၃ ရက်လောက်ရှိပြီ၊ ဒီစံခလက မွန်ဘက်ကမ်းက အသိအိမ်တွေမှာလိုက်နေကြရတယ်၊ သုံးဆူကိုပြန်ရင် ထိုင်းဘက်ကို ကျောင်းလာမတက်ရတော့ဘူး” ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့မှ ကျောင်းသား ၅၀ ဦ်းကျော်ခန့် ကျောင်းကြိုပို့ကားများဖြင့် စံခလပူရြီံမို့ရှိ၊ ထိုင်းအထက်တန်းကျောင်း၌ နေ့စဉ်ကျောင်းတက်နေကြသည်။
ထိုင်းန်ိုင်ငံဘုရားသုံးဆူရွာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘုရားသုံးဆူမြို့ကို ပိုင်းခြားထားသော နယ်ခြားဂိတ်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ထားပြီး ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့က ဘုရားသုံးဆူရွာ၊ အမှတ် ၂ လမ်းသွယ်မှမလွယ်ပေါက်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပေးကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်လာသူများကို ထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနမှ တစ်ဦးချင်းဆေးစစ်စမ်းသပ်မှုများ ယနေ့နံနက်စောစောမှ စတင်ပြုလုပ်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်လာသူများကို တန်းစီပြီးတစ်ဦးချင်းစစ်ဆေးရသဖြင့် အလုပ်သမားများစွာ အလုပ်ခွင်သို့ အဝင်နောက်ကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဖျားရှိသူများကိုသာ မြန်မာနယ်မြေဖက်သို့ ပြန်ခိုင်းစေပြီး ဆေးစစ်ဆေးပြီးသူများကို လက်ဖျံတို့တွင် တဆိပ်မှင်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဤကဲ့သို့နေ့စဉ်အသွားအပြန် ဝင်ရောက်လာသူများကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များမှ ငွေကြေးကောက်ခံမှုများ တစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။
ဘုရားသုံးဆူရွာ(ထိုင်း)၌ အထည်ချုပ်စက်ရုံများရှိကာ နေ့စဉ်မြန်မာနိူင်ငံမှ အလုပ်သမား တစ်ထောင်ကျော်ခန့် ဝင်ရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ တရားဝင်အလုပ်သမားများ မဟုတ်ကြသော်လည်း နယ်စပ်ဖြစ်နေသဖြင့် ယင်းအလုပ်သမားတို့ နေ့စဉ်ဝင်ထွက်သွားလာမှုများကို ထိုင်းအဏာပိုင်များ အနှောက်အယှက် တစုံတရာမပြုကြပေ။
သို့ရာတွင် ဘုရားသုံးဆူမြို့ပေါ်သို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်လာကြသည့် ဒေသခံမဟုတ်သူများ၊ မျက်နှာစိမ်းများကို မြန်မာအာဏာပိုင်များ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း မြို့ခံတစ်ယောက်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် စံခလပူရီတွင် နေထိုင်နေသူများကို လာရောက်ခွင့်မပြုဟု သတင်းများပေါ်ထွက်နေသော်လည်း ဘုရားသုံးဆူမြို့ပေါ်သို့ နေ့စဉ်ဝင်ထွက်ကာ လာရောက်စီးပွားရှာလုပ်ကိုင်နေသူများ အသွားအလာမပျက်ကြပေ။မြန်မာအာဏာပိုင်များ၏ အကြောင်းပြချက်မှာ စံခလပူရီမြို့တွင် ယခင်အပတ်က ဝက်တုတ်ကွေးရောဂါရှိနေသူကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုကြသည်။
လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့က ဝက်တုတ်ကွေးရောဂါ A(H1 N1) လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်မှု စတင်တွေ့ရှိခဲ့သူနှင့် နီးစပ်သူများကို စံခလပူရီဆေးရုံကြီးတွင် သီးသန့်ထား၍ ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားခဲ့ရာ အခြေအနေကောင်းမွန်နေကြသော်လည်း သတ်မှတ်ကာလမပြည့်သေးသဖြင့် ဆေးရုံ၌သာ ဆက်လက်ထားရှိသည်။
အဆိုပါဝက်တုတ်ကွေးရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံစံခလပူရီမြို့နယ်တွင် ပညာပေးမှုများတိုး၍ ပြုလုပ်နေသလို မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင်လည်း မြန်မာအာဏာပိုင်များ ပညာပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဒေသခံဗမာ၊ မွန်နှင်ကရင် တိုင်းရင်းသားတို့ကြားတွင် ရောကူးစက်ပုံကို သေသေချာချာမသိကြသေးကြောင်းနှင့် လွဲမှားစွာသိနေကြကြောင်း မေးမြန်းချက်များအရ သိရသည်။ ဝက်များတွင်အဆိုပါ တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး ၄င်းဝက်သားစားသုံးမိခြင်းကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားရသည်ဟု အများကထင်မြင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
ဤရောဂါသည် လူအချင်းချင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှတဆင့် ကူးစက်ခံရသောရောဂါဖြစ်သည်။
နယ်စပ်ဒေသတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများကို ထိုင်းကျန်မားရေးဖွဲ့က A(H1N1) ရောဂါပိုးစစ်ဆေး
ဒီကေဘီအေ ထိုးစစ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်မှုကြောင့် ရွားသား ၂၀၀ ကျော် ထိုင်းသို့ ထွက်ပြေးနေရ
နယ်စပ်ဒေသတွင် ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေး A(H1N1) ကာကွယ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
ဒုတိယမြောက်ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေး A(H1N1) ရောဂါပိုးကူးစက် ခံရသူ အခြေအနေပြန်ကောင်းမွန်လာ
ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းမှူးမှ မီးသွေးဖိုဖျက်ဆီးပြီးနောက် မီးသွေး အတွက်အခက်ကြုံ
Fri 24 Jul 2009, IMNA
တနင်္သာရီတိုင်း ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ်မှ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်မှ မီးသွေးဖို သုံးရာကျော် ဖျက်ဆီးပြီးနောက် ဒေသအတွင်ရှိပြည်သူများ မီး သွေးအတွက် အခက်ကြုံနေကြရသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် မီးသွေးလည်း ပြတ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီး မီးသွေးဈေးလည်း မြင့်တက်သွား ခဲ့သည်ဟု မီးသွေးဖိုပိုင်ရှင်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဖျက်ဆီးခံရသော မီးသွေးဖိုပိုင်ရှင်တို့မှာ လျှော်ကြေးတစ်စုံစရာမရရှိခဲ့ပါ။ ဖျက်ဆီးခံရသော မီးသွေးဖိုမှာလည်း ကော့သောင်း၊ မြိတ်၊ ပုလော၊ ပု လောက်နှင့် ဘုတ်ပြင်မြို့နယ်တို့မှ ဖြစ်သည်။
ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ်မှ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်မှ ပူပြင်းလွန်ခြင်း၊ ဆူနာမီနှင့် နာဂစ်ကဲ့သို့်သော ရေလေသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက် မည်ကို ကာကွယ်ရန် အတွက်ဟုဆိုပြီး ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ရှိမီးသွေးဖို သုံးရာကျော်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု မီးသွေးဖိုပိုင်ရှင်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မီးသွေးအတွက်ကုန်ကြမ်းကို ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိ ဒီရေတောမှ ပေါက်ရောက်သော သစ်များကို ခုတ်တွင်နေကြသည့်အတွက် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တားဆီရန်ဟုဆိုကာ လွန်ခဲ့သည့် တလခန့်က ဖျက်ဆီးခဲ့ သည်။ ကမ်းရိုးတန်းတိုင်း တိုင်းမှူး ထို့သို့ဖျက်ဆီးခဲ့ သည်မှာ နေပြည်တော်မှ လာသည့်အမိန့် ဖြစ်သည်ဟု ၄င်းပိုင်ရှင်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
သို့သော် တိုင်းမှူးနှင့်နီးစပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုသာ ၄င်းလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၄င်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခံခဲ့ရသောလုပ်ငန်းရှင်တို့မှာ တိုင်းမှူးနှင့်နားလည်မှုရယူထားပြီး ၄င်းလုပ်ငန်းရှင်းများကြောင့် သုံးစွဲသူ တို့အတွက် အနည်းငယ်ပြေလည်ခဲ့ပြီး ထိုနားလည်းမှုအတွက် ငွေကြေးကို အကောက်အဖြစ် တိုင်းမှူထံသို့ လုပ်ငန်းရှင်းများက ပေးသွင်းကြရသည်။
သုံးစွဲသူတို့၏အဆိုအရ “ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကအပင်နဲ့ ဖုတ်ထားတဲ့မီးသွေးက ထမင်းဟင်းချက်တဲ့အခါ မီးပွားလည်းမကျရောက်ဘူး။ သုံးစွဲရတာလည်း တာရှည်ခံတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှရသော သစ်ပင်ဖြင့် ဖုတ်ထားသောမီးသွေးသည် ရောင်း သည့်အချိန် တွင်လည်း အလေးချိန်ပိုမိုရရှိကြောင်း မီးသွေးဖိုပိုင်ရှင်နှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် ရခိုင်ဒေသရှိ ဒီရေတောမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိ ပျက်စီးနေကြပြီး လက်ရှိအများဆုံးပျက်စီးနေသည်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဖြစ်ပြီး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပျက်စီးသွားပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Fri 24 Jul 2009, အာသံ
ယနေ့နံနက် (၆) နာရီအချိန်မှစ၍ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှ ထိုင်းဘက်ကမ်းသို့ အလုပ်လုပ်နေသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများကို ထိုင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်းကာ အလုပ်သ မားများကို A(H1N1) ရောဂါပိုးစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရပါသည်။
ထိုင်းဘက်ကမ်းရှိစက်ရုံအတွင်း၌ အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာအလုပ်သမား များသည် ထိုင်းကျန်မာရေး ဌာနမှ ရောဂါပိုး စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းကို ခံယူ နေရကြောင်း ထိုင်းဘက်ကမ်း ဖိနပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်နေသော အမျိုး သမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ထိုင်းကျန်မာရေးဌာနတွေက ကျမတို့သွေးကို မစစ်ပဲနဲ့ အပူချိန်တိုင်းယုံ လောက်ပဲ ပြီးတာနဲ့ ကဒ်ထုတ်ပေးတယ်။ သူတို့က လူကိုယ်ထဲမှာ ဖုဝဲတွေ့မှ သာ သွေးစစ်ဆေးတာမျိုးလုပ်နေတယ်” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောပါသည်။
ထိုင်းဘက်ကမ်းမှ ထုတ်ပေးသော ကဒ်ပြားမရှိပါက သွားရေးလာခွင့်မရှိ၍ ဘုရားသုံးဆူဒေသခံ ပြည်သူများကလည်း သွားလာရေးလွယ်ကူအောင် ထိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနေသော နေရာတွင် တန်စီပြီး အစစ်ဆေးခံနေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ဒီမနက် အလုပ်သမားနဲ့ ဒေသခံ ထောင်ချီပြီးရှိနေကြတယ်၊ ထိုင်းဘက် ကမ်းမှာ ရောဂါပိုး စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့ နေရာအရှေ့မှာ စစ်ဆေးခံနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ထိုင်းဘက်ကမ်းမှာ ထုတ်ပေးတဲ့ Travelers Arriving in Thailand မရှိရင် သွားလာခွင့်မရှိဘူး” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောပါသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေး A(H1N1) ရောဂါ မကူးစက်ပြန့်ပွားသွားအောင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဘုရားသုံးဆူမြို့ ဝင် ပေါက်များကို စစ်ဆေးမှုများ ပိုမိုတင်းကျပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
၄င်းနယ်စပ်ဝင်ပေါက်သည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ထိုင်းအစိုးရနှင့် မြန် မာအစိုးရတို့က တရားဝင် ပိတ်ထားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ယခုချိန်ထိ နား လည်မှုဖြင့် နယ်စပ်ပြည်သူတို့က ဝင်ပေါက်သုံးပေါက်ဖြင့် သွားလာနေကြ သည်။
“ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့မတိုင်ခင်က အဓိက ထိုင်းဘက်ကမ်းမှာ အလုပ်လုပ်နေ တဲ့သူတွေ ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေ ဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ ဝင်ပေါက်မှပဲ ကျန်းမာရေးဌာနကနေ စစ်ဆေးတာရှိတယ်၊ ဝက်တုပ်ကွေး ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပညာပေးအစည်းဝေးခေါ်ထားပြီး ယခုဆိုရင် စစ်ဆေးမှုတွေ ပိုတင်းနေတယ်” ဟု ဘုရားသုံးဆူမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့က မြို့နယ်မယကဥက္ကဌနှင့် ဘုရားသုံးဆူရှိ မြန်မာအ စိုးရ အဖွဲ့ပေါင်းစုံ ၂၅ ဖွဲ့တို့မှ ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေး အသိပညာ ပေးအစည်းဝေးပြုလုပ်ပြီးနောက် ထိုင်းဘက်ကမ်းနှင့် မြန်မာဘက်ကမ်း သို့ဝင်ထွက်သွားလာနေသည်များကို ရောဂါစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်။
Fri 24 Jul 2009, မိမွန်စွန်း
ဒီကေဘီအေက ကေအန်ယူတပ်ကို ထိုးစစ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်မှုကြောင့် ကရင် ရွားသား ၂၀၀ ကျော်ခန့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးနေရသည်ဟု TBBC က ယမန်နေ့တွင် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၄င်းအစီအရင်ခံစာတွင် ကရင်ရွားသားများသည် ဒီကေဘီအေ၏ အတင်းအ ဓမ္မ စစ်သားစုဆောင်းခြင်း၊ ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ ငွေးကြေးနှင့် စာနပ်ရိက္ခာ တောင်းခံခြင်းတို့ကြောင့် အိုးအိမ်ပစ္စည်းများ စွန့်ခွာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့` ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
ရွာသားများသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ဘက်ကဖြစ်ပြီး၊ ယခုအ ချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထာ့ဆောင်ယန်းမြို့နယ်အတွင်း မဲ့ယူဆူ (Mae U Su) တွင် ယာယီစခန်းချပြီး နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ (၇) ကို ဒီကေဘီအေနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ကရင်ရွာသား ထောင်နှင့်ချီကာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေကြရသည်။
“မြန်မာပြည်ထဲကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကရင်ရွာသားတွေ အခုချိန်မှာ အ ယောက် (၅၀၀) လောက်တိုးလာတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ဒီကေဘီအေ ထိုး စစ်ဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့၊ ကရင်ရွာသားတွေ မြန်မာပြည်ထဲကနေ ထွက် ပြေးလားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ဒီကေဘီ အေ နှိပ်စက်မှုကို မခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာရတယ်” ဟု KRC အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကပြောသည်။
HURFOM ကထုတ်ပြန်ထားသည့် သတင်းအရ မြန်မာစစ်တပ်က ဒီကေဘီ အေအမည်ခံပြီး၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်မှာ တစ်အိမ်ကို ဆန် ၁ တင်း ကောက် ခံနေသည်ဟု သိရသည်။ အကယ်၍ မပေးနိုင်လျင် ငွေ ၁၀၀၀၀ ပေးရ မည်ဟု သိရသည်။
၀ တပ်ထွက် နှင့် ဗျူဟာမှူးပေါင်း၍တာချီလိတ်လယ်သမား လယ်မြေများ အဓမ္မဈေးနှိမ်ဝယ်
သောကြာနေ့၊ 24 ဇူလိုင်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်ဒေသခံလယ်သမားအချို့အား လယ်မြေများရောင်းပေးရန် ၀ တပ်ထွက် ဗိုလ်မှူး တဦးနှင့်အပေါင်းပါလောဝ်ပန်းတစ်စုက တာချီလိတ်ဗျူဟာမှူးနှင့်ပူးပေါင်း၍ အဓမ္မလက်မှတ်ထိုးခိုင်းသည်ဟု နယ် စပ်သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
လက်ဖက်တောင်သူ ငါးသိန်းကျော် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကြုံ
စစ်အစိုးရရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အဝါရောင် ဓာတုဗေဒ ဆိုးဆေး အိုရာမင်းအို ပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ လက်ဖက်ရောင်းချမှုတွေကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လက်ဖက်လုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေကြရတဲ့ ပလောင်ဒေသက လက်ဖက်စိုက် တောင်သူ ငါးသိန်းကျော်ဟာ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ ပလောင်အဖွဲ့တွေ စုစည်းထားတဲ့ ပလောင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ဇူလိုင်လ ၂၃ရက်မှာ ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ခုလို ပလောင် တိုင်းရင်းသားတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကျပ်အတည်း အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့က စစ်တမ်းကောက်ယူ ပြုစုပြီး ‘လက်ဖက်ဖျက်ပိုး’ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အစီရင်ခံစာ တစောင်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတရပ် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တနေရာမှာ ဇူလိုင်လ ၂၃ရက် မနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲရာမှာအဖွဲ့ရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် မိုင်ဘုန်းကျော်က အခုလိုပြောပါတယ်။
မိုင်ဘုန်းကျော်။ ။ 'ကျနော်တို့ ဒီအစီရင်ခံစာကို ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ လက်ဖက် စားသုံးသူတွေ သိရှိအောင် လုပ်မယ်၊ လက်ဖက်တောင်သူတွေကို သိရှိအောင်လုပ်မယ်၊ နအဖက သူစီမံခန့်ခွဲနေတာက မှားနေပါတယ်၊ သူက ဒါကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း မရှိဘူး ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သက်သေပြမယ်။ နအဖကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိူးနဲ့ တစုံတရာ ဖိအားပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မိသားစုကို တင်ပြသွားမယ်၊ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့က WFP ကမႝာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကို တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ရဲ့ အစီရင်ခံစားကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ ပလောင်မိဘပြည်သူတွေ ငတ်ပြတ်နေတယ် အစားအသောက်မဲ့ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို တစုံတရာ ဖန်တီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်၊ ကမႝာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့က သိရှိသွားမယ်ဆိုရင် ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ပညာဆက်မသင်နိုင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ အတွက် တစုံတရာ ကူညီလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။'
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂ဝဝ၉ မတ်လဆန်းက စပြီး လက်ဖက်မှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဓာတုဗေဒ ဆိုးဆေး ပါဝင်နေတာကြောင့် စားသုံးရန်မသင့်ဘူးလို့ ကြေညာပြီးလက်ဖက်ရောင်းချခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပိတ်ပင်တာဟာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်တာဖြစ် ပေမဲ့လည်း စနစ်တကျ မဟုတ်ပဲ သိမ်းကျုံးပြီး ဖျက်ဆီးပစ်တာတွေ ပိတ်ပင်တာတွေ လုပ်လိုက်တာကြောင့် ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ ပလောင်ဒေသက သာမန်လက်ဖက်စိုက် လက်ဖက်ခူးတောင်သူတွေရဲ့ဘဝတွေ နစ်နာနေကြရပြီလို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
လက်ဖက်တွေကို ပိတ်ပင်ဖျက်ဆီးတဲ့ နေရာမှာလည်း မျှမျှတတ မဟုတ်ပဲ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ မိုင်ဘုန်းကျော်က အခုလို ထောက်ပြပါတယ်။
မိုင်ဘုန်းကျော်။ ။ 'အသိသက်သေနဲ့ ကျနော် ထောက်ပြမယ်ဆိုရင် နမ့်ဆန်မြို့မှာဆိုရင် တပ်မတော် အချိုခြောက်စက်ရုံဆိုပြီး လက်ဖက်စက်ရုံ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိစက်ရုံမှူးက ဗိုလ်ကြီးသန်းထွန်း။ ဗိုလ်ကြီး သန်းထွန်းဆိုရင်သူ ကိုယ်ပိုင် ပိုင်တဲ့ လက်ဖက်စက်ရုံလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အမျိုးတွေ သူတို့နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ဟာတွေ သူတို့တွေလည်း လက်ဖက်စို လုပ်ကြတယ် ဆိုတော့ အဲဒီလက်ဖက်ကလည်း အဝါရောင် ပါတယ်။ အဲဒါ တွေကလည်း အသိမ်းခံရတဲ့ အထဲမှာပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ စါရင်းထဲမှာ မပါဘူး ဆိုတာ တွေရတယ်။ အဲဒါတွေ ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် နအဖရဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးယန္ဈရားဟာ ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဘယ်လိုမှ အကာအကွယ် မပေးနိုင်ဘူး၊ သူတို့က ဒီလိုပြဿနာတွေကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုမှ မခန့်ခွဲနိုင်ဘူးဆိုတာ သက်သေပြလို့ ရပါတယ်။'
ဒီအစီရင်ခံစာ ရေးသားဖို့ ဧပြီလကနေစပြီး ၂လကြာ အချက်အလက်တွေလိုက်လံ စုဆောင်းခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ လက်ဖက်အဓိက ထွက်ရှိတဲ့ နမ့်ဆန်၊ မန်တုန်၊ နမ့်ခမ်း၊ ကျောက်မဲစတဲ့ ဒေသတွေအပြင် လက်ဖက်တင်ပို့တဲ့ မြန်မာပြည်အတွင်းပိုင်းက ရန်ကုန်နဲ့ မန္ဈလေးမြို့ကြီးတွေက ကုန်သည်တွေ၊ လက်ဖက်ခြံပိုင်ရှိင်၊ လက်ဖက်စို၊ လက်ဖက်ခြောက် စက်ရုံပိုင်ရှင်၊ ပွဲရုံပိုင်ရှင်၊ စားသုံးသူနဲ့ လက်ဖက်ခူးသမားအပြင် ဒေသခံအာဏာပိုင် စသဖြင့် စုစုပေါင်း လူ ၁၆၂ဦးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး ခုလို ထုတ်ပြန်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့ ‘ပလောင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့’ကို တအောင်းကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များ အစည်းအရုံး (TSYO)၊ ပလောင် အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (PWO) နဲ့ ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF) စတဲ့အဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရုတ်နယ်စပ်မှ အလည်ခရီး ဧည့်သည်များကို မြန်မာဖက်မှ ပိတ်ပင်
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံဖက် ကမႝာလှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ ဝင်ရောက် လည်ပတ်တာကို မြန်မာဖက်က ပိတ်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ကြတာဟာ အလည်အပတ် သဘောမျိုး မဟုတ်ပဲ စီးပွားလာလုပ်ကြတာလို့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်မတင်မီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေများတွေ့ဆုံ
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေ ဒီကနေ့ ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။မနက်ဖြန် သောကြာနေ့မှာ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်မတင်ခင် တွေ့ဆုံဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ရှေ့နေတွေက တင်ပြ တောင်းဆို ခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်းက အခုလို ပြောဆိုပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်း။ ။ 'မနေ့က က္ဆွန်တော်တို့က အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှာ စာတင်ပါတယ်။ က္ဆွန်တော်တို့ ထပ်တွေ့ဖို့ တောင်းတာဟာ အရေးကြီးတယ်။ က္ဆွန်တော်တို့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက် အတွက်လည်း နောက်ဆုံး အပြီးသတ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ က္ဆွန်တော်တို့ အဲလို တင်တယ်။ တင်တာ တင်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အခုလို ပေးတွေ့တာပါ။ က္ဆွန်တော်တို့လည်း ဒီနေ့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်အတွက် နောက်ဆုံး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေးသား လျှောက်လဲချက်အနေနဲ့တော့ အပြီးတော့ မပြီးဘူးပေါ့။ က္ဆွန်တော်တို့က စာပြန်ရေးရဦးမယ်၊ စာပြန်ရိုက်ရဦးမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန် အချိန်မီအောင်တော့ က္ဆွန်တော်တို့ ကြိုးစားပြီး လုပ်ရမှာပဲ။'
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် တောင်းခံခဲ့တာကို မနေ့ကတော့ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ပယ်ချခဲ့ပြီး၊ ဒီနေ့မှ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တရားရုံးချိန်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံး အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်တင်သွင်း ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်အတွင်း တစုံတယောက်ကို ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့ အချက်အလက်တွေ မပါစေဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထူးတလည် မှာကြားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်း။ ။ 'အကြောင်းထူးတာတော့ ထူးထူးခြားခြားက က္ဆွန်တော်တို့ ရေးသားတဲ့ စာမျက်နှာ ၂ဝကျော်မှာ ဥပမာ၊ လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ လုံခြုံရေး ဖောက်တာ ဘာညာဆိုတာ၊ ဒါ အဖြစ်အပျက်တွေလေ၊ အဲ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို ထိခိုက်အောင် မရေးဖို့၊ အဖြစ်အပျက်ကိုလည်း ဖော်ပြရမယ်၊ အဲဒီလို က္ဆွန်တော်တို့ကို လမ်းညွှန်ပါတယ်ခင်ဗျ။'
မနက်ဖြန်လျှောက်လဲချက်တင်အပြီးမှာ၊ နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချမဲ့ ရုံးချိန်ရက်ကို တရားသူကြီး တွေက သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားရုံးတင် စစ်ဆေးတဲ့အမှုမှာ၊ တရားစွဲဆိုသူ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဖက်က တင်သွင်းတဲ့ သက်သေ ၁၅ ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်က သက်သေ ၄ ဦးသာ တင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ ၂ ဦးကိုပဲ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားပြန် စစ်တပ်အရာရှိသုံးဦး ပြည်ပကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
ဇူလိုင်လ ၂ဝ ရက်နေ့ကစလို့ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးနဲ့ ပြည်ပ ထွက်ခွာမဲ့သူတွေ အခွန်ငွေ ပေးသွင်းရတဲ့ ပုံစံ ၁၉ ရုံးတို့ကို နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေပြီးနောက် အရာရှိ၊ ဝန်ထမ်းတချို့နဲ့ ပတ်စပို့ပွဲစားတွေ အပါအဝင် လူ ၈ဝလောက်ကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ အဲဒီရုံးတွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ တပ်မတော်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့် အရာရှိသုံးဦးဟာ ပွဲစားတွေကတဆင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ ရယူပြီး၊ ပြည်ပကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားတဲ့အတွက် နေပြည်တော် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့က အဲဒီရုံးတွေကို အခုလို အပူတပြင်း စီးနင်း ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တာလို့ ပတ်စပို့ရုံးနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
ပတ်စပို့ရုံးနှင့် နီးစပ်သူ။ ။ 'ရုရှားကနေ ပညာသင်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ကက်ပတိန် သုံးယောက် တံဆိပ်တုံးအတုတွေ ဘာတွေ လုပ်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြား ထွက်သွားတာပေါ့။ ထွက်သွားတော့ ထိုင်း၊ ထိုင်းကတဆင့် ဘယ်သွားဦးမလဲတော့ မသိဘူးပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ သူတို့ ပွဲစားတွေ လိုက်ဖမ်းတာပေါ့။ ပွဲစားတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတချို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ဆိုင်တွေကိုပါ ဝင်ဆွဲတာပေါ့။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ နာမယ်နဲ့ တိုက်ပြီးတော့၊ ပွဲစား အယောက် ၈ဝ လောက်လို့ ကြားတာပဲ။ သူတို့ဆီမှာ စာရင်းတွေ ရှိတယ်။ အရင်တုန်းက ပတ်စပို့ ပွဲစားတွေပေါ့။ ပတ်စပို့ ပွဲစားဆိုတာ အရင်တုန်းက အက်စ်ဘီဟောင်းတွေ များပါတယ်။ အက်စ်ဘီပြုတ်တွေလေ။'
ဒါ့ပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ် မှတ်တမ်းတွေ အပါအဝင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ရုရုား၊ မြောက်ကိုရီးယားစတဲ့ နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက် ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက် စာရွက်စာတမ်းတွေ ပေါက်ကြားခဲ့တာဟာ အဲဒီ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိ ၃ ဦးရဲ့ လက်ချက် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေက အထူးအလေးထား ဖော်ထုတ်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ဖို့ နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရန်ကုန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးနဲ့ ပုံစံ ၁၉ အခွန်ရုံးတို့ကို RFA ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ တယ်လီဖုန်း ကိုင်သူတွေက လက်ခံဖြေဆိုမှု မရှိပါဘူး။
ဒီကနေ့မှာတော့ ပတ်စပို့ရုံးနဲ့ ပုံစံ ၁၉ ရုံးတွေမှာ ခါတိုင်းနဲ့မတူပဲ လူသူ အထူးနည်းပါး ခြောက်ကပ်နေတာ တွေ့ရတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံတချို့က ပြောပါတယ်။ ပတ်စပို့ရုံးနဲ့ ပုံစံ ၁၉ ရုံးတွေဟာ ကြိုးနီစနစ် များတာကြောင့် ပွဲစားတွေ အထူးပေါများသလို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အဆိုးဆုံး ရုံးတွေအဖြစ် လူသိများပါတယ်။
ကူကီးတိုင်းရင်းသားအမည် အတင်းအကျပ်ဖျောက်ခိုင်း၍ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
မြန်မာစစ်အစိုးရက စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ကူကီးတိုင်းရင်းသားတွေကို ကူကီးမျိုးနွယ်စု နာမည်ကို ဖျောက်ဖျက်ပြီး ထာဒိုချင်း လူမျိုးများသာ ဖြစ်ကြောင်း အတင်းအကျပ် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတာဟာ ကူကီးတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် မျိုးတုံးစစ်ဆင်ရေး လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို တန်းတူဆက်ဆံရေး တောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတခုကို ပြည်ပရောက် ကူကီးတိုင်းရင်းသားတွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာ ဇူလိုင် ၂၃ရက် ဒီကနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
နယူးဒေလီရှိ ဂျန်တားမန်တားပန်းခြံမှာ ကူကီးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ စုစုပေါင်း အင်အား ၆ဝကျော်ွွေ့ကးကြော် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ ကူကီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလက်လန်းက ကူကီး တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် စစ်အစိုးရက အနိုင်ကျင့်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဦးလက်လန်း။ ။ 'ကူကီးခေါင်းဆောင်တွေကို အတင်းအကျပ် ခေါ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ကူကီးလူမျိုး မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ အင်မတန်မှ ရိုင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါမျိုး ကမႝာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မကြားဖူးပါဘူး၊ ကျနော်တို့ လူမျိုးမှာလည်း ကျနော်တို့ လူမျိုးနာမည်ကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ကူကီးဆိုတာ ဗမာပြည်မှာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ဒီနေ့ပြောလာပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဆိုတာလည်း ဘယ်လိုမှ ဖော်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစစ်အစိုးရဟာ လူမျိုးစုံအပေါ်မှာရော ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအပေါ်မှာရော အမြဲဗိုလ်ကျစိုးမိုးဖို့ ကလိမ်ကကျစ် ဥာဏ်တွေသုံးပြီးတော့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ ရတဲ့နည်းနဲ့ အနိုင်ယူဖို့ လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ပဲ သိတယ်။ '
ကူကီးကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုလူလွန်းကလည်း ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်အမည်နဲ့ပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်တဲ့အတွက် တောင်းဆိုရတာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်က ကူကီးတိုင်းရင်းသားတွေ အနှိမ်ခံဘဝနဲ့နေခဲ့ရတာကို ပြောသွားပါတယ်။
ကိုလူလွန်း။ ။ 'တိုင်းရင်းသားရဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ အတိုင်းပဲ ကျနော်တို့က လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ အမည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ နယ်မြေထဲမှာ ကျနော်တို့က လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီရေး ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့က လွတ်လွတ်လပ်လပ် တိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က ကူကီး အရေးလုပ်ရင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက်လည်း တိုက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက အမျိုးမျိုး ခြိမ်းခြောက်တယ်ပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ခံခဲ့ရတာ ၁၉၆၇ ကနေ ခါတော်မီ စစ်ဆင်ရေးမှာလည်း ကူကီးဆိုပြီးတော့မှ သူတို့က မောင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်၊ နောက်မှ ဒီလိုမျိုး ပြသနာဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ တချို့က ကူကီးဆိုတာ မပြောရဲကြဘူး။ ကူကီးဆိုတာက ကျနော်တို့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ဟာ ကူကီးဖြစ်တယ်။ အရင်ကလည်း ဖြစ်တယ်။ နောင်လည်း ဖြစ်တယ်။'
ကူကီးကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုလူလွန်း ပြောသွားတာပါ။ ကူကီးတိုင်းရင်းသားတွေဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်း ဟုမ္မလင်းဒေသ ခန္ဈီးမြို့နယ် လေရှီးမြို့နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံ မြို့နယ်တွေမှာ အများစု နေထိုင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့က တမူးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကူကီးတိုင်းရင်းသားတွေကို ကူကီးတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပဲ ထာဒိုချင်း တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်ကြောင်း အတင်းအကျပ် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ရာကနေ ဒီပြဿနာတွေ စတင်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ရွက်ဟောင်းတို့ ကြွေလွင့်ခဲ့ပြီး ရွက်သစ်တို့ ဝေဝေဆာသည့် သည်ဝသာန်ခါ ရာသီ ရောက်ချေပြီ။ စိမ်းစိုသော သစ်ပင် သစ်ခက်တို့သည် လေပြင်းနှင့်အတူ သည်းထန်လှသော ရန်ကုန်မိုးကို အံတုရင်း ယိမ်းနွဲ့လျှက် ရှိကြသည်။ ကြပ်ညပ်လှသော ၃၉ ဘတ်စ်ကားကို စီးရင်း ဝက်တုပ်ကွေး မကြောက်၊ ကူးစက်ရောဂါ မကြောက်ဖြင့် ရန်ကုန်ထဲအသွား ရှေးဟောင်း အဆောက်ဦနီနီကြီး နံဘေး ကွေ့ဝိုက်မောင်းနှင် ချိန်တွင် လမ်းမပေါ်၌ ရေဆိုးတို့ဖြင့် လျှံနေပေပြီ။
ယိုယွင်း ပျက်စီးနေသော မြို့တော်ရန်ကုန် နေရာ အတော်များများသည် မိုးသည်းသည်း ရွာသည်နှင့် မကြာမီ ကားလမ်းတို့ ရေလျှံတက်နေ တတ်ပြီ။ ဝန်ကြီးများ ရုံးကို ပတ်ဝိုက် မောင်းနှင် ဖြတ်သန်းတိုင်း ရင်ထဲ အောက်မေ့ သတိရမိသည်မှာ ဤ အဆောက်အဦးကြီး အတွင်း အသက်စတေး ပေးဆပ် သွားရရှာသော အာဇာနည်ကြီးများ အကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ အော် ... ဘာလိုလိုနဲ့ မကြာခဏ ဆိုလျှင်ပင် အာဇာနည်နေ့ တို့ကို တိုက်စားသွားသည်မှာ ၆၂ ခုနှစ်နှစ်ပင် တိုင်ခဲ့ချေပြီ။
အာဇာနည်နေ့ ဆိုသည်နှင့် အတူ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ဘဝက ကြားခဲ့ဖူးသော ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်း အစီအစဉ် ရေဒီယို အသံလွှင့်ချက်များ။ ကျဆုံးသော အချိန် အထိမ်းအမှတ် ဥသြဆွဲသံများ နှင့် ကလေး အရွယ်ပင် ဖြစ်ချိမ့်သော်လည်း ထိုဥသြသံ ကြားသည့် အခါတိုင်း ရောက်သည့်နေရာ ကြားသည့်အချိန် သတိတရ ဖြင့် အလေးပြု ငြိမ်သက် အောက်မေ့ခဲ့ပုံများ၊ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်းထသည့်တိုင်အောင် ခေါင်းဆောင်ကြီး များအား အောက်မေ့ ချီးကျူး လေးစားခဲ့ပုံများကို ပုံရိပ်များသဖွယ် တလှပ်လှပ် ပေါ်ပေါက် မြင်ယောင် လာလေသည်။ အော် …….. ငယ်စဉ်က ကြုံခဲ့ရဖူးသည့် မြင့်မြတ်သော အတွေ့အကြုံတို့ ယခု မရှိတော့လေပြီ။
အာဇာနည် ဆိုတာ အဆိုတော်လား? ဟု ခေတ်လူငယ် အများစုက မေးနေကြလေပြီ။ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ရုပ်လွှာ ပုံရိပ် တို့ကိုပင် ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် ဆောင်သိမ်း ချိတ်ဖွက် နေရတော့သည်။ လတ်တလော သုံးစွဲနေရသော ရှာရန် ခက်သလောက် သုံးရန်လွယ်သည့် တန်ဖိုးမဲ့ ငွေကြေးစက္ကူများ စုတ်ပြတ်သတ်ကာ မသတီဖွယ် ဖြစ်နေခြင်းကို ကြည့်ပြီး မိမိတို့ မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားရသော ဗိုလ်ချုပ် ဖခင်၏ ပုံရိပ် ဤငွေ တို့အပေါ် မရှိတော့ သည်ကိုပင် ကြံဖန် ကျေးဇူးတင် ရအုံးတော့မည်။
အာဇာနည်ကြီးများ အကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့ဖူးသော မိန့်ခွန်းတချို့ကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှုမိသည်။ မိမိတို့ လူဖြစ်နေသော ခေတ်ကို ပိုင်းခြား မိခြင်းမျှသာ။ သံဖြူဇရပ် စစ်သင်္ချိုင်း ဖွင့်ပွဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်က ဤသို့နှယ် ပြောခဲ့သည်။
လူတဦး တယောက်ဟာ... အခြားလူတဦး တယောက်ကို နှိပ်စက် ကလူပြုတယ်၊ သွေးစုပ် ချယ်လှယ်တယ် ၊ တရား မျှတမှုကို မျက်ကွယ်ပြုတယ် ဆိုရင်... ဒါမှ မဟုတ်နိုင်ငံ တခုက အခြား နိုင်ငံတခု အပေါ် ဖိနှိပ်ခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ တရား မျှတမှု အဝဝကို ချိုးဖေါက်ခြင်း၊ ပြုမယ်ဆိုရင် ထိုလူ (သို့မဟုတ်) ထို နိုင်ငံဟာ ထို မတရားမှု အတွက် အပြစ်ဒါဏ် ခတ်မှုကို မုချမလွဲ ခံရစမြဲဘဲ ဖြစ်တယ်။
လူတဦးက တဦးပေါ်မှာ ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတခုက တခုပေါ်မှာ ဖြစ်စေ။ ဖိနှိပ် ချယ်လှယ်မှုတွေ ခေါင်းပုံ ဖြတ်မှုတွေ ပြုလုပ် ခဲ့ကြလို့လည်း ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ် ရှိခဲ့ပါပြီ။ တရားမဲ့ခြင်း ၊ ဖိနှိပ် ချယ်လှယ်ခြင်း ၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းတို့ ဆက်လက် တည်ရှိနေသရွေ့ တုန့်ပြန် လက်စားချေမှု တွေဟာ မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်နေအုံးမှာပဲ…...
ဗိုလ်ချုပ်သည် အမြော်အမြင် ကြီးမားစွာဖြင့် နောင်လာ နောက်သားတို့ အတွက် မှာခဲ့၏။ တရား မျှတသော မြန်မာ့လူ့ဘောင် စနစ်ကို တည်ဆောက် ကျင့်သုံးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့၏။ သူသာ ရေတိမ် မနစ်ခဲ့လျှင်၊ မိမိတို့ မြန်မာပြည်သည် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေချိမ့်မည် မဟုတ်ဟု လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်သည်။
သူ ... မရှိတော့သော နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဖခင် မရှိတော့သော နောက်၊ မွန်မြတ် မှန်ကန်သော လူထု ခေါင်းဆောင်တို့ မရှိတော့သည့်နောက် ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား များစွာတို့သည် လူဖြစ်သော်လည်း လူလို နေနိုင်သူ၊ လူလို တွေးတော ကြံဆနိုင်သူ မဟုတ်ကြတော့ပေ။ အရာရာကို အကြောက်တရားနှင့် ယှဉ်ပြီး ကိုယ်ကျိုး အတ္တ အစွဲအတွက်သာ တွေးကြံလှုပ်ရှား တင်းတိမ် ရောင့်ရဲရင်း ဘဝများစွာတို့ ရှင်လျှက်နှင့်ပင် သေနေကြလေပြီ။
မြန်မာပြည်တွင်း မိမိတို့ လူဖြစ်သည် ဆိုကတည်းက လောကဓံ ဆိုသည်နှင့် အတူ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ ဘာသာရေးအရ၊ စီးပွားရေးအရ၊ ဖိနှိပ်မှုများ တွန်းအားပေးမှုများ ပြန်လည် ဝေဖန်ရန် ခက်သော ဖိစီးမှု အခြေအနေများစွာ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ယနေ့ တိုင်လည်း မြင်ရတွေ့ နေရဆဲပင်။ လူဖြစ်နေ၍လား? ... လူလို နေထိုင်ခွင့် မရသေးသည့် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကြောင့်လား? ... ဘာကြောင့်တော့ သေခြာ မသိချေ၊ ဖိနှပ်ချုပ်ချယ် အနိုင်ကျင့်မှု များကတော့ ခံနေရသည်မှာ ပီပြင် သေခြာလှသည်။
မိမိတို့ လူဖြစ်နေသော ခေတ်သည် မချိတင်ကဲ ဖြစ်ဖွယ်များစွာ တွေ့ကြုံ နေရသည်။
ယနေ့ပင် ဝန်ကြီးများရုံး အနားဖြတ်သန်း အသွား စီးလာသော ကားကို စိန်ပေါလ် မီးပွိုင့်လမ်းဆုံ သစ်ပင်ကြီး တပင်ခြေရင်း အုတ်ခုံပေါ်တွင် ခြေတဖက် တင်၍ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဟန်ပန် စီးကရက်ကို တဖက်က ကိုင်ထားသော ယာဉ်ထိမ်းရဲ က ခရာ ... တတွီတွီ အဆက်မပြတ် တွတ်မှုတ်၍ ကားရပ်ရန် အချက်ပြ တားဆီးပါသည်။ ကျန်တဦးက ခါးထောက်ပြီး ဒေါသ ထွက်နေဟန်ဖြင့် ကားပေါ်ပါ လူအားလုံးကို မိုက်ကြည့်ကြည့်သည်။
အမှန်တကယ် မိမိတို့ ခရီးသည် အားလုံးတွင် ဘာအပြစ်မှ ရှိသည်မဟုတ်။ အဖြစ်ကို မသိလျှင် ယာဉ်ထိမ်းရဲကျွေး ထားသော ထမင်းကို ကားစီး ခရီးသွားအားလုံးက စားထားသည့် နှယ်။
ဦးထုပ်မဆောင်း ယူနီဖေါင်း ကြေကြေ မျက်နှာက ယဉ်ကျေးမှု တစက်မှ မထွန်းကားသော ရုပ်နှင့်၊ စီးကရက်နှင့် ကွမ်းယာကို တရစပ် သုံးစွဲနေဟန် ရှိသော သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးသည် အရက်သေစာလည်း သောက်သုံးထားသည် ထင်ရသည်။
ကားစပါယ်ယာ က ပြေးဆင်းသွားပြီး ထိုနှစ်ဦးကို မျက်နှာချိုသွေးသည်၊ ပိုက်ဆံ နှစ်ရာကို ထိုးထည့်ပေးသည်ကို ရပ်ထားသော ကားပေါ်မှ ဖြတ်ကနဲ လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအခါ အုတ်ခုံပေါ် ခြေတဖက် တင်၍ ရင့်သီးလှသော မျက်နှာပေးဖြင့် တခြားလမ်းဖက် မျက်နှာ မူနေသော ရဲက လှည့်၍ပင် မကြည့်၊ မတူမတန်သည့်ဟန်။
ငါးရာတန် ထိုးပေးလိုက်သော အခါမှ မလိုချင် လိုချင်၊ မယူချင့် ယူချင် ဟန်ဖြင့် လှစ်ကနဲ ယူပြီး ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ပြီးမှ လွန်စွာ သဘောထားကြီးသည့် ဟန်ဖြင့် လက်ညိုး တငေါက်ငေါက် ထိုးကာ စကားတချို့ပြောသည်ကို ကားပေါ်မှ မိမိတို့ အားလုံး မြင်နေ တွေ့နေ ရသည်။
စပါယ်ယာလေး ကားဆီ အပြေးလာရင်း မောင်းဆရာရေ့... ဟု .. ဇောင်းထဲမှ လွတ်သော မြင်းလို ကဆုန်စိုင်း၍ အအော် ... ကားကအထွက် ... ခရီးသည် အချို့ထံမှ ဗျစ်တောက် ဗျစ်တောက် အသံတချို့လည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ စကားလုံး အချို့သည် တိုင်ပင် ကိုက်မထားပါဘဲလျှက် တူညီနေလေသည်။
စပါယ်ယာကို လက်တို့ မေးကြည့်ပါသည်။ ဘာကြောင့် သူတို့ လက်တား ဖမ်းဆီးသလဲ ? ဆိုသောအခါ။ ဤနေရာတွင် ဘတ်စ် ကားတိုင်းက လမ်းကြောင်းကြေး ၁၀၀ ပေးနေကျ ဖြစ်ကြောင်း ယခု မိမိ တို့ကားက မပေးဘဲ မီးစိမ်းပေါ်သည့် မီးပွိုင့်ကို ဖြတ်မောင်းလာ၍ ပြန်ခေါ်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။
စိတ်ထဲ ဦးဆုံး သတိရမိသည်မှာ ဤနေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် အသက်ဆုံးရှုံး သွားခဲ့ဖူးသော ကျွန်ုပ်တို့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အာဇာနည်ကြီးများ ကိုပင် မထောက်ထား ရက်လေတော့ သလား?။
အကြောင်းဧကန် သင့်လျော်ခြင်း ရှိသည် မရှိသည် မသိပါ။ ယနေ့ တိုင်းပြည် ပရမ်းပတာ ဖရိုဖရဲ နှင့် နေရာ တကာတွင် ယူနီဖေါင်းဝတ် ဆိုသူတိုင်းကို ကြောက်နေရခြင်းအား လုံးဝ သဘောမကျ စရာ၊ မနှစ်မြို့စရာပင်။
ပျက်စီး ယိုယွင်းသော ခေတ်ကို ဖန်တီးသည့် တရားခံသည် အုပ်ချုပ်သောသူ အဓိက ဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ တရားခံမှာ ထိုသို့ အုပ်ချုပ်သော သူတို့ကို လက်ခံထားသည့် တော်လှန်ပြောင်းလဲရန် မကြိုးစားသည့် ပြည်သူလူထု ကိုယ်၌ပင် ဖြစ်ပေရာ၊ မိမိတို့လည်း ဒုတိယ တရားခံ စာရင်းထဲ ပါနေသည်ဟု တနုတ်နုတ် တွေးနေမိသည်။ နောက် မျိုးဆက်သစ်တို့ အပေါ် တာဝန် ကျေပွန်ခဲ့ခြင်း အလျဉ်းမရှိသည့် လူသား မဖြစ်လိုသော မိမိမှာ လူတွေအကြား လှုပ်ရှားသွားလာရင်း ခေတ်လူငယ် တဦးအဖြစ်နှင့် လည်းကောင်း၊ တပ်မတော် မျိုးချစ်စစ်သားဟောင်း တဦးအနေဖြင့် လည်းကောင်း ထို့အတွက် ရတက်မအေး အတွေးများစွာ အရေးများစွာကို နေ့စဉ်နီးပါး တွေးတော စဉ်းစားနေတတ်သည်မှာ ကြာခဲ့ချေပြီ။
သို့တိုင် ဘာမှ လက်တွေ့ အကောင်ထည် မပေါ်လာသေးဟု မချင့်မရဲ ဖြစ်မိတိုင်း တစုံတခုကို ဝံ့ဝံ့စားစား ဆုံးဖြတ် ချင်မိသည်။ ဖေါက်ထွက်ရေး နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေချင်မိသည်။ ပေါင်းစည်းနိုင်မည့် ကမ်းလက်များကို ရှာဖွေချင်မိသည်။ အားပေးနိုင်မည့် စွမ်းအားများကို တီထွင် ချင်မိသည်။
တခုတော့ စဉ်းစားမိသည်။ မိမိတို့ နိုင်ငံ ယခုလို ဖြစ်နေခြင်း ယနေ့လို မွတ်သိပ် ကြပ်တည်းစွာ ခံစားနေရခြင်း များ၏ အကြောင်းရင်းခံမှာ မိမိတို့ နိုင်ငံသားများ ထဲတွင် အာဇာနည် စိတ်ထား ရှိသူတို့ နည်းပါးနေ၍ ဖြစ်ကြောင်း တခုသာ တွေးမိသည်။
အာဇာနည် စိတ်ထား ရှိသူကို မျှော်နေ၍ ပြီးမည်လား? .....
စာဆို တခုကို သတိရမိသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် မြင်ချင်သော ဖြစ်ရပ် အခြေအနေတခု ပေါ်ပေါက်ဖို့ အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ထိုဖြစ်ရပ်ကို အကောင်ထည်ဖေါ် ကျင့်သုံးသူ ဖြစ်ဖို့လိုသည်...
အာဇာနည် စိတ်ထားတော့ မမှီပါ။ သို့သော်လည်း ခါတော်မီ အာဇာနည်လဲ မဟုတ်ရပါ၊ အများပြည်သူ အတွက် ဘဝအချိန် ပေးဆပ်ရင်းနှီးရမည့် မည်သည့် ဒုက္ခမျိုးကို ကြုံရပေ့စေ ရင်ဆိုင်ဖေါက်ထွက်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားပြီးပြီဟု ယုံကြည်သည်။
ကမ်းလင့်သော လက်များ။ ပေါင်းစည်းမည့် လက်များ၊ ဖေးမမည့် လက်များ။ ပင့်တင်မည့် လက်များ။ တွဲခေါ်မည့် လက်များ၊ မိုးကာမည့် လက်များ၊ ချည်တွဲ အားဖြည့်မည့်လက်များ ပေါ်ထွက်လာအောင် ကြိုးပမ်းရေး အတွက် လူငယ်ထုကြီး တရပ်လုံးနှင့် ယှဉ်သော အင်အားစုကြီး တခု ပေါ်ထွန်းလာပါစေဟု ရည်မှန်းကာ လာမည့် နေ့သစ်များတိုင်း နိုင်ငံရေးအသစ် ပုံစံတို့ ပေါ်ထွက်ရေးကို မျှော်လင့် နေမိတော့သည်။
တရားမျှတမှု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ ညီညွတ်ရေး ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မည့် ကျယ်ပြန့်သော အင်အားစုကြီးမျိုး တခုကို လိုလိုလားလား တောင့်တ နေမိကာ မကြာမီ ခေတ်သစ်သို့ ချည်းကပ် နိုင်လိမ့်မည်ဟုလည်း လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်နေမိသည်။